The MYAWADY Daily: July 2014
မိုးရာသီသို့ ရောက်ရှိ လာသည်နှင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ပင်လယ် ကမ်းခြေ ဒေသများတွင် မြက်ပုစွန် များကို ပေါများစွာ ဖမ်းဆီး ရမိလေ့ ရှိရာ ယခုအခါ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ၊ ဘိုကလေး မြို့နယ် ပင်လယ်ကမ်းခြေ ဒေသ ၊ လိပ်သောင် ရေကျော် ၊ ပိုက်စီးတန်း ၊ ကျွဲဖြူ ၊ သောင်သာ ၊ ပဒဲကော စသည့် ကျေးရွာများ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဒေသများတွင် ပေါများစွာ ဖမ်းဆီးရရှိ နေပြီး ဈေးကွက် သွက်လက်လှုပ်ရှား နေကြောင်း ကျွဲဖြူကျေးရွာတွင် နေထိုင်သည့် ကျားလုံးပိုက် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ ကိုကျော်ဝင်း က ပြောသည်။
မြက်ပုစွန်ကို ဈေးကွက်တွင် ဘော့ချိတ် ဟုလည်း ခေါ်သည်။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပဈေး ကွက်ရှိနေသော ပုစွန်များ ဖြစ်သည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ပင်လယ်ကမ်းခြေ ဒေသများတွင် မိုးရာသီ ရောက်လာ သည်နှင့် လယ်ကွက်များ၊ ဗွက်အိုင်များ တွင် တင်ကျန် နေရစ်သည့် ပုစွန်ဥများမှာ အကောင်ပေါက် လာကြ သဖြင့် အဆိုပါ မြက်ပုစွန် များကို ပင်လယ် ရေလုပ်ငန်းများ သာမက မြစ်ထဲ၊ ချောင်းထဲ၊ ဗွက်အိုင် များထဲမှာပင် ပေါများစွာ ဖမ်းယူရမိ နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြက်ပုစွန်သည် ပုစွန်ချဉ် ပြုလုပ်သည့် ပုစွန် အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ အခွံပါးပြီး အသားထူသည်။ အရောင်လှပြီး အချိုဓာတ် များသဖြင့် ဟင်းလျာအဖြစ် ချက်ပြုတ် စားသောက် ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ ပုစွန်ခြောက် ပြုလုပ်ရာတွင် ဖြစ်စေ အသုံးပြုသော ပုစွန်များ ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် မြက်ပုစွန်များမှာ ပုစွန်ခြောက်၊ ဟင်းစားပုစွန် အဖြစ် သာမကဘဲ ပုစွန်ချဉ် အဖြစ်ပါ ပြုလုပ် နိုင်သဖြင့် ဈေးကွက် အတွင်း အစဉ်အမြဲ သက်ဝင် လှုပ်ရှားမှု ရှိနေသည့် ပုစွန်များ ဖြစ်သည်။ ကမ်းနီး ပင်လယ်ပြင် နှင့်
မြစ်ကမ်းခြေ များတွင် မိုးရာသီ ရေလုပ်ငန်းများ မှ ဖမ်းယူရရှိ နေသကဲ့သို့ ချောင်းတွင်း၊ လယ်ကွင်း နှင့် ဗွက်အိုင်များတွင် ဂေါ်ထိုးခြင်း၊ ကွန်ပစ်ခြင်း၊ အိုင်ပက်ခြင်း စသည့် ရေလုပ်ငန်းများ အပြင် ဇောင်းလှေ လုပ်ငန်း များမှလည်း ဖမ်းယူရမိ နေသည်။ လက်ရှိ ဒေသတွင်း ဈေးကွက်များ တွင် မြက်ပုစွန် တစ်ပိဿာလျှင် ငွေကျပ် ၁၈ဝဝ မှ ၂ဝဝဝ အထိ ပေါက်ဈေး ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ မြက်ပုစွန် များကို ဒေသတွင်း ကုန်သည်များ နှင့် ပုစွန် အဝယ်ဒိုင် များက ဝယ်ယူ ကြသည်။ မြို့ဈေးကွက် များတွင် မြက်ပုစွန် တစ်ပိဿာလျှင် ငွေကျပ် ၂၂ဝဝ မှ ၃ဝဝဝ အထိ ပေါက်ဈေး ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ကုန်သည်များက ပုစွန်ခြောက် (ကျပ်တိုက်ခြောက်) ပြုလုပ်၍ ရောင်းချ ကြသည်။ ဒေသတွင်း ဈေးကွက်များတွင် မြက်ပုစွန် ကျပ်တိုက်ခြောက် တစ်ပိဿာလျှင် ငွေကျပ် ၁၄ဝဝဝ မှ ၁၈ဝဝဝ အထိပေါက် ဈေးရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့ ဈေးကွက်များတွင် တစ်ပိဿာလျှင် ငွေကျပ် ၂၂ဝဝဝ မှ ၂၅ဝဝဝ အထိ ပေါက်ဈေး ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့ကြောင့် မိုးရာသီ အတွင်း အဆိုပါ ဒေသများ၌ ကျပ်ဖို လုပ်ငန်းများ၊ ကျပ်ဖို အလုပ်သမားများ၊ ပုစွန် အဝယ်ဒိုင်များ၊ လက်ငယ် ကုန်သည်များ နှင့် ပင်လယ်ရေ လုပ်ငန်းငယ် များမှာ အလုပ်မပြတ် လုပ်ကိုင် နေကြရကြောင်း သိရသည်။
လောကမှာ ပညာဟာ တန်ဖိုး မဖြတ်နိုင်ဆုံးသော ရတနာ ရွှေအိုး တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စကားပုံ ၊ သာဓက များစွာ ရှိပါတယ်။ ပညာမရှိရင် လူလောက၌ ပွဲလယ် မတင့်ဘဲ နေရာ တကာတွင် မျက်နှာငယ် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပညာကို ငယ်စဉ် အခါမှစ၍ အရှက် အကြောက် မရှိဘဲ မပေါ့မလျော့ ၊ သင်အံ ကျက်မှတ် ၊ သင်ယူ လေ့လာဆည်းပူး မှသာ တိုးတက်တဲ့ လူနေမှု အဆင့်အတန်း နဲ့ ရင်ပေါင်တန်း လိုက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ငယ်စဉ် တောင်ကျေး ကလေးဘ၀မှ စ၍ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ပိုမိုတိုးတက် အောင်မြင်လာအောင် ဆရာ ဆရာမ များရဲ့ ဆိုဆုံးမမှု ကိုလည်း နာခံတတ်ဖို့ နဲ့ မမှားသင့်တာ မမှားရအောင် သင်ယူ လေ့လာ ဆည်းပူး ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပညာကို ရှာမှီးရာတွင် အိုသည် မရှိပါ။ ပညာကို လေ့လာသင်ယူ လိုလျှင် ကောင်းမွန်သော မည်သည့် အသိပညာ ၊ အတတ်ပညာ မျိုးကိုမဆို ဆရာသမား မရွေး ၊ အဆင့်အတန်း မရွေး ပညာရှိသူများ ထံမှ မှီဝဲ ဆည်းကပ် နည်းယူပြီး လေ့လာရပါမယ်။ ကလေးငယ် လေးများရဲ့ ဘ၀ တိုးတက်မှုဟာ ငယ်စဉ်ကပင် အရေးကြီး သောကြောင့် ငယ်စဉ် အခါမှစ၍ စာပေတွင် သာမက ဗဟုသုတ ရဖွယ် စာအုပ် စာပေများ ဖတ်ရှုခြင်း ၊ အားလပ်ချိန် များတွင် ကိုယ်လက် လှုပ်ရှား အားကစားများ ပြုလုပ်ခြင်း ၊ သစ်ပင် ပန်းမန်များ စိုက်ပျိုးခြင်း နဲ့ ယဉ်ကျေး လိမ္မာစေရန် ကလေး လူငယ်များ အတွက် ဖွင့်လှစ် သင်ကြား ပေးနေတဲ့ ယဉ်ကျေး လိမ္မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ သင်တန်း များကို တက်ရောက် စေခြင်း အားဖြင့် တိုးတက်နေသော ခေတ်ကြီးကို အမီလိုက် နိုင်ဖို့ ကြိုးစားသင့် ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခု ပြောချင်တာ ကတော့ တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးကို အမီလိုက်နိုင်ဖို့ ဆိုတာကို တလွဲ အထင်မမှား ကြဖို့ ပြောကြား ချင်တယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ယနေ့ အချိန်အခါမှာ မြို့တိုင်း ၊ ရပ်ကွက်တိုင်း တွင် အင်တာနက် ဆိုင်တွေ ၊ ဂိမ်းဆိုင်တွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အတုမြင် အတတ်သင် ဆိုသလို ယခုလို ကျောင်းဖွင့်စ ကာလမှာ ကျောင်းဆင်းပြီး တာနဲ့ အိမ်မပြန် သေးဘဲ ဂိမ်းဆိုင် ၀င်ပြီး ဂိမ်းဆော့ ကစားတတ်တဲ့ အကျင့် မလုပ်မိဖို့ လိုပါတယ်။ ဂိမ်း ကစားခြင်း ကလည်း စွဲလမ်း စေတတ်တဲ့ ကစားနည်း ဖြစ်တဲ့ အတွက် အတုယူ မမှား ကြဖို့ မှာချင် ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ငယ်ရွယ်စဉ် ပညာရှာချိန်မှာ အလေ့အကျင့် ကောင်းများနဲ့ အသိဉာဏ်ပညာ ကောင်းများကို သင်ယူ လေ့လာခြင်းဖြင့် ကလေးများရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ အရည်အသွေး များကို တိုးတက် ကောင်းမွန် လာပြီး စာပေရဲ့ ကျေးဇူးတရာ များကိုလည်း သိရှိ နားလည်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ ရှင်သန် ရပ်တည်ဖို့နဲ့ ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံး မယိမ်းမယိုင်ဖို့ ၊ လမ်းဖြောင့် တည့်မတ် သွားဖို့ ၊ ထက်မြက် ထူးချွန်တဲ့ လူကောင်း တစ်ဦးဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ ငယ်ရွယ်စဉ်မှစပြီး စာသင်ချိန် ၊ ကစားချိန် ၊ အစားစားချိန် ၊ အိပ်ချိန် တို့ကို စနစ်တကျ အကျိုးရှိစွာ အသုံးချ သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ လုပ်ဆောင် သွားနိုင်မှသာ ထို ကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာ ပိုမို ကောင်းမွန်လာပြီး စာပေကို ချစ်မြတ်နိုး တဲ့စိတ် ၊ အများ အကျိုးကို သယ်ပိုး ရွက်ဆောင် လိုတဲ့စိတ် နဲ့ အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို လေးစား တန်ဖိုးထားတဲ့ စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်ပြီး အနာဂတ် ကာလမှာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် ထူးချွန်တဲ့ လူရည်ချွန် ၊ လူရည်မွန် ကောင်းများ ပေါ်ထွန်း လာမှာ မုချမလွဲ ဧကန်ပင် ဖြစ်ပါကြောင်း ရေးသား တင်ပြ လိုက်ရပါသည်။
မြ၀တီရသစုံမဂ္ဂဇင်း ( ကလေးလူငယ် ကဏ္ဍမှ )
အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၃) အမှတ်(၃၀)
( 31-7-2014 ရက်ထုတ် ဂျာနယ် )
Posted by myawady at 12:08 PM No comments:
တေဇရုပ်စုံစာစောင် အတွဲ(၂၆) အမှတ်(၃)
( ၂၀၁၄ ခုနှစ် သြဂုတ်လထုတ် )
မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၁၇) အမှတ်(၄၁)
မြန်မာ - အိန္ဒိယ နယ်စပ်တွင် စတုတ္ထမြောက် ကုန်သွယ်ရေး နှင့် စစ်ဆေးရေးစခန်း ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်
ပလက်ဝ ၊ ၃၁-၇-၂၀၁၄
မြန်မာ - အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး စခန်းနှင့် ကုန်ပစ္စည်း စစ်ဆေးရေး စခန်းကို ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့ တွင် ဖွင့်လှစ်ရန် လျာထား ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နှင့် နယ်စပ် တစ်လျှောက်တွင် တမူး ၊ ရိဒ် နှင့် ထန်တလန် (ယာယီ) နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး စခန်း ၃ ခု ဖွင့်လှစ်ထားပြီး စတုတ္ထမြောက် စခန်းအဖြစ် ပလက်ဝမြို့ တွင် ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ် ထားကြောင်း ၊ ယင်း အတွက် မြေနေရာ သတ်မှတ် နိုင်ရေး ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်းများကို စတင် ဆောင်ရွက် နေပြီ ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်း ၏ လုပ်ငန်း အားလုံး ပြီးစီးပါက စီမံခန့်ခွဲ ထိန်းသိမ်း အုပ်ချုပ်ရေး ပိုင်းကို မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရက တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပြီး အန္ဒိယ အစိုးရက ကုန်စည် ဖြတ်သန်း ပို့ဆောင်ခကို ပို့ကုန်တန်ဖိုး ၏ ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ပေးဆောင်ရန် သတ်မှတ် ထားကြောင်း သိရသည်။
ချင်းပြည်နယ် နှင့် မီဇိုရမ် ပြည်နယ် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး စခန်းနှစ်ခု ဖြစ်သော ရိဒ် ကုန်သွယ်ရေး စခန်းနှင့် ထန်တလန် ယာယီ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး စခန်းကို ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခု ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်မည့် ပလက်ဝ စခန်းကို အကောင် အထည်ဖော် နိုင်ပါက ချင်းပြည်နယ် အတွင်း ထွက်ရှိသော စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး ထွက်ကုန်များသည် ပလက်ဝ မှတစ်ဆင့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံနှင့် အခြား ဈေးကွက်များသို့ တင်ပို့နိုင်မည့် အပြင် နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူများ အချင်းချင်း ဆက်ဆံရေး ၊ နယ်စပ်ဒေသ နှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး တို့ကိုလည်း အထောက် အကူပြု နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၃၁-၇-၂၀၁၄) ကြာသပတေးနေ့
ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံးနိုင်ငံ အဖြစ်မှ လွတ်မြောက်ရေး
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် သည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန် ထမ်းဆောင်မှု တစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၌ မိန့်ခွန်းတစ်ရပ် ပြောကြား ခဲ့သည်။ ထိုမိန့်ခွန်း တွင် ''ကုလသမဂ္ဂ ထောင်စုနှစ် ရည်မှန်းချက် နှင့်အညီ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတွင် ၂၆ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေသည့် ဆင်းရဲမှုနှုန်း အား ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် ၁၆ ရာခိုင်နှုန်း အထိ လျှော့ချနိုင်မှု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံဘဝမှ ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက် နေပါကြောင်း'' ထည့်သွင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အစဉ်တစိုက် ပင် ဆင်းရဲမှု လျှော့ချရေး လုပ်ငန်းစဉ် များကို အလေးပေး ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ သည် ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံများ စာရင်းဝင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံများစာရင်းကို ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၂၅ နိုင်ငံဖြင့် စတင်သတ်မှတ် ခဲ့ရာ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် ၄၈ နိုင်ငံရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ရာတွင် ဝင်ငွေနိမ့်ကျမှု စံသတ်မှတ်ချက်၊ လူသား အရင်းအမြစ် စံသတ်မှတ်ချက် နှင့် စီးပွားရေး ထိခိုက်လွယ်မှု စံသတ်မှတ်ချက် တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ပထမစံနှုန်းမှာ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ၏ သုံးနှစ်ပျမ်းမျှ အမျိုးသား ဝင်ငွေအပေါ် အခြေခံသည့် တစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေသည် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် သတ်မှတ်ချက် အရ ဒေါ်လာ ၉၉၂ အောက်ဖြစ်ပြီး စာရင်းဝင် နိုင်ငံအဖြစ်မှ လွတ်မြောက်ရန် ဒေါ်လာ ၁၁၉ဝ အထက် ရှိရမည် ဖြစ်ပေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် စာရင်းများ အရ တစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေမှာ ၁ဝ၅၇ ဒေါ်လာ ရှိသည့်အတွက် သတ်မှတ်ချက် ပြည့်မီရန် လက်တစ်ကမ်းသာ လိုပေ တော့သည်။
ဒုတိယ စံနှုန်းမှာ လူသား အရင်းအနှီး ညွှန်းကိန်း ဖြစ်ပြီး အာဟာရ ချို့တဲ့မှု၊ ငါးနှစ်အောက် ကလေး သေဆုံးနှုန်း၊ အလယ်တန်း အဆင့် ကျောင်းနေနှုန်း၊ သက်ကြီး စာတတ်မြောက်နှုန်း ညွှန်းကိန်း (၄) ရပ်ကို ဆတူ အမှတ်ပေး သတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံစာရင်းမှ လွတ်မြောက်ရန် ၆၆ မှတ် သတ်မှတ် ထားရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် ကျန်းမာရေး နှင့် ပညာရေး သတ်မှတ်ချက် အဆင့်၌ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် ၆၈ ဒသမ ၆ ရှိသည့် အတွက် သတ်မှတ်ချက် ၆၆ မှတ်ကို ကျော်လွန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
တတိယ စံနှုန်းမှာ စီးပွားရေး ထိခိုက်လွယ်မှု ညွှန်းကိန်း ဖြစ်ပြီး လူဦးရေ၊ ဝေးလံခေါင်သီမှု၊ ပို့ကုန်အမည် နည်းပါးမှု၊ ဂျီဒီပီတွင် လယ်ယာ၊ သားငါး၊ သစ်တောကဏ္ဍ ပါဝင်မှုအချိုး၊ မြေနိမ့်ကမ်းခြေ ဒေသရှိ လူဦးရေ အချိုး၊ ပို့ကုန်နှင့် ပြည်ပ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ မတည်ငြိမ်ခြင်း၊ သဘာဝ ဘေးသင့် ဒုက္ခသည်များ၊ လယ်ယာကဏ္ဍ ထုတ်လုပ်မှု မတည်ငြိမ်ခြင်း စသော အချက်အလက် များကို ပေါင်းစည်း တွက်ချက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံအဖြစ်မှ လွတ်မြောက်ရန်မှာ ၃၂ မှတ် ရှိရပေမည်။ အဆိုပါ သတ်မှတ်ချက် အဆင့်နှင့် ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ချက် ပြည့်မီရန် ကုန်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံအဖြစ်မှ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ပထမ စံနှုန်းဝင်ငွေ နိမ့်ကျမှု စံသတ်မှတ်ချက် နှင့် တတိယ စံနှုန်း စီးပွားရေး ထိခိုက်လွယ်မှု စံသတ်မှတ်ချက် တို့ပြည့်မီရန် လိုအပ် နေသည်။ ထို လိုအပ်ချက်များ ပြည့်မီမှသာ ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံအဖြစ်မှ လွတ်မြောက် နိုင်မည် ဖြစ်ပေသည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် အညွှန်းကိန်းများ တစ်ခုချင်း တိုးတက် ကောင်းမွန်စေရန် နှင့် အရှိန်အဟုန် မြှင့်တင် ဆောင်ရွက် သွားရန် အတွက် နိုင်ငံတော် ဒုတိယ သမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်းဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဦးဆောင်သော မြန်မာနိုင်ငံ အား ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံအဖြစ်မှ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၂ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့သည်။
ဒုတိယ သမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်း က လိုအပ်သော အညွှန်းကိန်းများ ပြည့်မီရေး အတွက် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဌာနများ၊ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အစိုးရများ၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍများ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်း၍ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း များ၏ အကူအညီများ ရယူ ဆောင်ရွက်ရန် နှင့် အဆိုပါ အဖွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ် ပူးပေါင်း၍ ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံအဖြစ်မှ လွတ်မြောက်ရေး လုပ်ငန်း အချိန်ဇယား ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက် သွားရန် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။
အမှန်အားဖြင့် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးရန်မှာ အုပ်ချုပ်သော အစိုးရ ကဏ္ဍသာမက ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ၊ ပြည်သူ၊ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထု အခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံး တက်ညီ လက်ညီ ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက် မှသာ အောင်မြင် နိုင်မည်ဟု မြဝတီက ယုံကြည်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံကို ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံးနိုင်ငံ ( LDC ) အဖြစ်မှ လွတ်မြောက်ရန် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူ အားလုံး ဝိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်း ကြပါရန် တိုက်တွန်း နှိုးဆော် လိုက်ရ ပေသည်။ ။
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၃၀-၇-၂၀၁၄) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ ကလေးထိန်းဂေဟာ တစ်ခုမှ ရင်နင့်ဖွယ် ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်
Children rest in one of the rooms of the La Gran Familia in Zamora, Michoacan State, Mexico, after the federal police raid which rescued 607 adults and children who prosecutors said were kept in deplorable conditions
မက္ကဆီကို နိုင်ငံ ဇာမိုရာမြို့ရှိ La Gran Familia ဂေဟာသည် ကလေးများကို အခကြေးငွေ ယူ၍ ပြုစု စောင့်ရှောက် ထိန်းကျောင်း ပေးသည့် ဂေဟာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဤ ဂေဟာကြီးကို ၁၉၄၇ ခုနှစ်က တည်ထောင် ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
La Gran Familia ဂေဟာသည် ဇာမိုရာမြို့ရှိ လူတိုင်းက ပညာသင်ကြား ပေးနေသော ကလေးထိန်း ဂေဟာတစ်ခုဟု သိနေကြသည်။ ထို့အပြင် ကလေးများ၏ လှုပ်ရှားမှု ပန်းချီ၊ ဖက်ရှင်၊ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ၊ သတ္တု လုပ်ငန်းများ၊ အုတ်စီလုပ်ငန်း နှင့် တေးဂီတ စသည်တို့ကို သင်ပြ ပေးနေသော ဂေဟာကြီး ဟု သိထားကြသည်။
သို့သော် ၄င်းဂေဟာရှိ ကလေး အတော် များများမှာ အနိုင်ကျင့်ခံ ပြန်ပေးဆွဲခံ ထားရကြောင်း သိရသည်။ မိဘများနှင့် မိသားစု များက အဆိုပါ ဂေဟာသည် သူတို့၏ ကလေးများကို လုံခြုံ ဘေးကင်းစွာ စောင့်ရှောက် ပြုစု ထိန်းကျောင်း ပေးရမည့် အစား ကြောက်စရာ ကောင်းပြီး ယူကျုံးမရ ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ကလေးပေါင်း ၄၅၈ ဦး အပါအဝင် လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၉၆ ဦးရှိသော ကလေး ထိန်းကျောင်း ဂေဟာ La Gran Familia ကို မက္ကဆီကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဝင်ရောက် စီးနင်းကာ ကြွက်များ၊ အင်းဆက် ပိုးမွှားများ အကြား ညစ်ပတ် စုတ်ပေသော အခြေအနေ မှ ခက်ခက်ခဲခဲ ကယ်ဆယ် ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့က ဂေဟာကို ဝင်ရောက် စီးနင်းစဉ် မက္ကဆီကို စစ်သားများက အပြင်ဘက်မှ လုံခြုံရေး ရယူပေးထား ရသည်ဟု သိရသည်။ မက္ကဆီကို တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မိဘများက ၄င်းတို့၏ ကလေးများကို ပြန်လည် ခေါ်ယူနိုင်ရေး အတွက် စုဝေး ရောက်ရှိ နေကြသည်။ အဆိုပါ ဂေဟာကို အာဏာပိုင်တို့ လက်အောက်တွင် ထားရှိလိုက်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့က အဆိုပါ ဂေဟာကို တည်ထောင် ခဲ့သူ Rosa del Carmen Verduzco နှင့် ဝန်ထမ်းရှစ်ဦး တို့ကို ဖမ်းဆီး ခဲ့သည်။
ဂေဟာကို တည်ထောင်ခဲ့သူ Rosa del Carmen Verduzco
ဒေသခံတွေက Verduzco သည် တစ်ခါတစ်ရံ အလွန် လေးစားစရာ ကောင်းကြောင်း၊ သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံ တွင် ကြောက်စရာ ကောင်းသူအဖြစ် ဇာမိုရာမြို့ ၌ ထင်ရှား ကျော်ကြားသူ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြသည်။ ဇာမိုရာမြို့ သည် မီချီကန် ပြည်နယ်တွင် ရှိပြီး လူဦးရေ ၁၈၆ဝဝဝ ရှိကြောင်း သိရသည်။ မီချီကန် ပြည်နယ်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ခြင်း တွင် နာမည်ကြီးသော ပြည်နယ်ဖြစ်ရာ မီချီကန် ပြည်နယ်မှ ပြည်နယ် နိုင်ငံရေး သမားများ မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး ဆင်းလျှင် Verduzco ၏ ဂေဟာတွင် ပုံမှန် လာရောက် တည်းခိုနားနေ ကြသည်အထိ သြဇာကြီးမား လေသည်။
''ကျွန်မထင်တာ တခြားဂေဟာ တွေမှာလို ကလေးကို အပတ်စဉ် သွားကြည့် တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီဂေဟာမှာက တွေ့လို့ မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်မ တိုင်တန်းဖို့ ရှေ့နေ ရှာကြည့် သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်ရှေ့နေ ကမှ ဒေသတွင်း သြဇာအာဏာ ကြီးမားတဲ့ မစ္စစ် Verduzco ကို ဘာမှ မလုပ်ရဲဘူး'' ဟု ဂေဟာမှ ကလေး၏ မိခင်တစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။ ကလေးမိဘ များ၏ တိုင်ကြားခြင်း များကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဝင်ရောက် စီးနင်း လိုက်သည့်အခါ ကြွက်များ၊ အင်းဆက် ပိုးမွှားများ ၏ ကြားမှာ နေကြရသော အရွယ် ရောက်သူ ကလေး ၁၃၈ ဦးအပါအဝင် စုစုပေါင်း ၅၉၆ ဦးကို တွေ့ရှိရပြီး ကယ်ဆယ် ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စောစောပိုင်း စုံစမ်း စစ်ဆေးချက် အရ Verduzco နှင့် သူ၏ ဝန်ထမ်းများသည် ဂေဟာတွင် နေထိုင်ကြ သူများအပေါ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သာမက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပါ အနိုင်ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ ကြကြောင်း ရှေ့နေချုပ်ရုံး ၏ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးမှူး ထောမက် ဇာရွန်ဒီ လူစီယို က ပြောကြား ခဲ့သည်။ ''ကလေးတွေကို အတင်းအဓမ္မ လမ်းတွေ မှာ တောင်းရမ်း ခိုင်းတယ်။ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ အိပ်ခိုင်းတယ်။ စားဖို့ မသင့်တဲ့၊ မကောင်းတဲ့ အစားအစာ တွေကို စားခိုင်းတဲ့ အထိ ရက်စက် ပါတယ်'' ဟု ၄င်းက သတင်းထောက် များကို ဆက်လက် ပြောပြခဲ့သည်။
ဂေဟာတွင် ယခင်က နေခဲ့ဖူးသော ဘာသာဆော့ဆီဒို က ''ဂေဟာ နေစဉ်က သမီးကလေးကို မွေးခဲ့တယ်။ အဲဒါကို Verduzco က သမီးကို သူ့ကိုပေးဖို့ အတင်း တောင်းယူခဲ့ပြီး သမီးလေး သုံးနှစ်ပြည့်တဲ့ အခါ အတင်း အဓမ္မ ခေါ်သွား ကြပါတယ်'' ဟု ပြောပြသည်။ သမီး ခြောက်နှစ်ပြည့် လို့ တွေ့ရအောင် သွားတဲ့အခါ သူတို့က ကလေးနဲ့ ကျွန်မကို ပေးမတွေ့ ပါဘူး။ နှစ်စဉ် ပေးရမယ့် ငွေကို မပေးရင် သမီးနဲ့ ဘယ်တော့မှ မတွေ့ရ တော့ဘူးဟု ခြိမ်းခြောက်ခံ ရတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ကို တိုင်ချင်ပေမယ့် ကလေးကို ရိုက်မှာ၊ အစာမကျွေးဘဲ ထားမှာ၊ ဒုက္ခပေးမှာ စိုးလို့ မတိုင်ဝံ့ကြောင်း ပြောပြ လေသည်။
အချို့ မိသားစုများက ပြောပြရာတွင် Verduzco ၏ နိုင်ငံရေး သြဇာ အရှိန်အဝါကို ကြောက်ကြသဖြင့် ဂေဟာမှ သူတို့ကလေး များကို ပြန်ခေါ်ရန် အတိုက်အခံ မလုပ်ရဲကြ ဟုဆိုသည်။ ယခု ဂေဟာကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဝင်ရောက် စီးနင်း ပြီးနောက် ကလေးများ၏ မိဘဆွေမျိုး များသည် ဂေဟာ အပြင်ဘက်တွင် ကလေးများ ၏ သတင်းကို ကြားရအောင် စောင့်နေကြကြောင်း သိရသည်။
နာမည်ကျော် မက္ကဆီကို စာရေးဆရာ နှင့် သမိုင်းဆရာ အင်းရစ် တို့သည် Verduzco အား မိဘမဲ့ ကလေးများကို ဂေဟာဖွင့် စောင့်ရှောက် ထားသော ဂုဏ်သရေရှိ အမျိုးသမီး ကြီးအဖြစ် ထုတ်ဖော် ချီးကျူး ပြောဆိုခဲ့ ဖူးကြောင်း သိရသည်။ La Gran Familia ဂေဟာ၏ ဖေ့ဘွတ်ခ် တွင် Verduzco သည် မက္ကဆီကို သမ္မတဟောင်း ဖီးလစ်ကာလဒရွန် နှင့် မီချီကန် ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း တို့နှင့် တွဲရိုက်ထား သော ဓာတ်ပုံများ ပြသထားသည်။ ထို့အပြင် တေးဂီတ တီးမှုတ်ေ နကြပုံများ၊ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနား ၌ ချီတက်နေပုံ များနှင့် အပျော်စီး ရထားများ အတူတကွ စီးနေကြပုံ များကို ပြသထားသည်။
La Gran Familia ဂေဟာ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် Verduzco သည် ကလေး အားလုံးကို မွေးစား ထားကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ ကလေး အားလုံး၏ နောက်ဆုံး နာမည် တစ်လုံးမှာ သူမ၏ နာမည်ဖြစ်သော Verduzco ဟူ၍ အသီးသီး ပါနေကြ သည်ဟု သိရသည်။
ဤသို့ဖြင့် La Gran Familia ဂေဟာသည် ကလေးများကို သနား ကြင်နာ၍ မွေးစားသည် ဆိုသည်မှာ အမှန်အကန် မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ကျိုး အတွက် တောင်းရမ်း ခိုင်းစားခြင်း နှင့် အလုပ်များကို အတင်းအဓမ္မ ခိုင်းစေခြင်း များကိုသာ အံ့သြဖွယ်ရာ ပြုလုပ် နေကြောင်း သိရသည်။
ထို့ကြောင့် ကလေးများ၏ အနာဂတ် သာယာ လှပရေးသည် မိဘများ အပေါ် အများကြီး မူတည် နေသောကြောင့် မိဘများ အနေဖြင့် အရာရာကို အလွယ်တကူ မယုံသင့်ဘဲ သေချာစွာ စဉ်းစားလေ့လာ ပြီးမှသာ ပြုမူ အပ်နှံသင့်ကြောင်း ဤ ရင်နင့်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းကို သင်ခန်းစာ ယူရန် အလို့ငှာ ရေးသား တင်ပြ လိုက်ရပါသည်။ ။
လိုင်စင်မဲ့ယာဉ် နှင့် လက်နက်ခဲယမ်း များ သိမ်းဆည်းရမိ
မော်လမြိုင် ၊ ၂၉-၇-၂၀၁၄
မွန်ပြည်နယ် ၊ သထုံမြို့မ ရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင် များသည် ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက် နံနက် ၂ နာရီခွဲက သထုံမြို့နယ် ၊ ပေါ်တော်မူ ကျေးရွာအနီး လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက် နေစဉ် ဘားအံ မှ သထုံ သို့ ကရင်နီ လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦး ( KNPLF ) ကယား ငြိမ်းချမ်းရေး အထူးဒေသ (၂) အဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူး အဆင့်ရှိ ခင်ဇော် (စီးပွားရေး တာဝန်ခံ) (ဘ) ဦးတင်မောင် လွိုင်ကော်မြို့ နေသူ မောင်းနှင် လာသည့် ယာဉ်အမှတ် ရှေ့နံပါတ် 6C/3322 ၊ နောက်နံပါတ် 3D/33352 တပ်ဆင် ထားသည့် နစ်ဆန်း အဖြူရောင် ယာဉ်နှင့် စောဖအောကုန် (ခ) ကိုစိုး (ခ) ကျော်စိုး ယခင် ( ဒီကေဘီအေ ဟောင်း ) (ဘ) ဦးဖိုးရော် လှိုင်းဘွဲ့မြို့ နေသူ မောင်းနှင် လာသည့် ယာဉ်အမှတ် 6C/3329 နစ်ဆန်း အနက်ရောင် ယာဉ်တို့ကို ရပ်တန့် စစ်ဆေး ခဲ့သည်။
ထိုသို့ စစ်ဆေးရာတွင် ယာဉ်နှင့် ပတ်သက်သည့် အထောက် အထား တစ်စုံတစ်ရာ တင်ပြနိုင်ခြင်း မရှိသည့် အပြင် ခင်ဇော် ၏ ခါးကြား အတွင်းမှ COUGAR အမျိုးအစား ပစ္စတို သေနတ် ၂ လက်နှင့် ၄င်းကျည် ၂ တောင့် ၊ ပွိုင့် ၂၂ လုပ်သေနတ် တစ်လက် နှင့် ကျည် ၁၃ တောင့် ၊ ယာဉ်မောင်း စောဖအောကုန် (ခ) ကိုစိုး (ခ) ကျော်စိုး ကို စစ်ဆေးရာ ယာဉ်၏ ကားခြေနင်း အောက်မှ BERETTA အမျိုးအစား ၉ မမ ပစ္စတို တစ်လက် နှင့် ၄င်းကျည် ၁၃ တောင့် တို့ကို တွေ့ရှိ သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆက်လက်၍ ခင်ဇော် နှင့် စောဖအောကုန် တို့နှစ်ဦးကို စစ်ဆေး မေးမြန်းရာ ၄င်းတို့ ၂ ဦးသည် လွန်ခဲ့သော တစ်ပတ်ခန့်က တောင်ကြီး မှ တို့ညီနောင် မှန်လုံယာဉ် ဖြင့် ပအိုဝ်း လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ (စိစစ်ဆဲ) မှ မောင်တကီး ဆိုသူက လက်နက်များကို တောင်ကြီးမြို့ သို့ ပို့ခိုင်းသဖြင့် သယ်ဆောင် လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သထုံမြို့မ ရဲစခန်း က ခင်ဇော် ကို (ပ) ၁၈၅/၂၀၁၄ ၊ လက်နက် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉(စ) အရ လည်းကောင်း ၊ စောဖအောကုန် (ခ) ကိုစိုး (ခ) ကျော်စိုး ကို (ပ) ၁၈၆/၂၀၁၄ လက်နက် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉(စ) အရ လည်းကောင်း အသီးသီး အမှုဖွင့် ထားကြောင်း သိရှိရသည်။ (၄၀၆)
နှစ်ပေါင်း ၅၂ နှစ်ခန့်သာ ဖြစ်တည် ထွန်းကားခဲ့သော ပင်းယခေတ်၏ ယဉ်ကျေးမှုလက်ရာ ကို ပင်းယဂူကြီးသုံးလုံး ၌ လေ့လာနိုင်
တံတားဦး ၊ ၂၉-၇-၂၀၁၄
ပင်းယကို သီဟသူမင်း သည် သက္ကရာဇ် ၆၇၄ ခုနှစ် တပေါင်း လဆန်း ၁၅ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တွင် တည်၍ ဝိဇယပူရဘွဲ့ နာမည်တပ်ကာ နန်းတော်၊မြို့တော်၊ ကျုံးတော်၊ ရွှေဂူဘုရား (ဂူတော်သစ်)၊ အတွင်း ရွှေကျောင်း၊ ရွှေစည်းခုံ၊ ထောက်ရှည်ကန် (ကန်လှ) ခုနစ်ဌာနကို တစ်ပြိုင်တည်း တည်ထား ခဲ့သည်။
ပင်းယခေတ် သည် သက္ကရာဇ် ၆၇၄ ခုနှစ်မှ ၇၂၆ ခုနှစ်အတွင်း နှစ် ပေါင်း ၅၂ နှစ်ခန့်သာ ဖြစ်တည် ထွန်းကား ခဲ့သည်။ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် မများပြား ခဲ့သော်လည်း အင်းဝခေတ်သို့ ပုဂံခေတ် လက်ရာ များကို အမွေ ပေးနိုင် ခဲ့သည်။
ပင်းယခေတ် လက်ရာများကို ပင်းယဂူကြီး သုံးလုံးတွင် လေ့လာ နိုင်သည်။ ဂူကြီး သုံးလုံးသည် တံတားဦးမြို့ ၏ တောင်ဘက် အင်းဝ - တံတားဦး လေယာဉ်ကွင်း သွား လမ်းမကြီး၏ အနောက် တောင်ဘက် ကုန်းပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ (ပုံ)
ဂူကြီးသုံးလုံး သည် တောင် - မြောက် တန်းနေပြီး သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကြောင့် ပျက်စီးနေပြီ ဖြစ်သည်။ တောင်ဘက်ဆုံး ဂူသည် အနည်းငယ် ပျက်၍ အလယ်နှင့် မြောက်ဆုံး ဂူသည် အပျက်အစီး များနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဂူကြီးများ၏ အတွင်းတွင် ဆင်းတုတော် လေးဆူစီ ထည့်သွင်း အပူဇော်ခံ ထားသည်။ ဂူကြီးသုံးလုံး ၏ အပြင်ပိုင်းတွင် ဇာတ်ရုပ် စဉ့်ကွင်းများဖြင့် တန်ဆာဆင် ထားသည်။
ဂူကြီးသုံးလုံး အနက် တောင်ဘက်နှင့် အလယ်ဂူတွင် နံရံဆေးရေး ပန်းချီများ ရှိခဲ့သော်လည်း ပျက်စီး နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကျောက်စာလည်း တွေ့ရှိရပြီး ပင်းယခေတ် တွင် စိတ်ဝင်စား ဖွယ်ရာ စနစ်မှာ စိုက်ပျိုးသီးနှံ များကို ခွဲပေးပုံ စနစ် ဖြစ်သည်။ ပင်းယခေတ်တွင် လယ်ယာထွက် သီးနှံကို ခွဲဝေယူရာတွင် စိုက်သူနှစ်စု ဘုရားတစ်စု ခွဲဝေယူရန် ဖြစ်သည် ဟုလည်း ကျောက်စာ မှတ်တမ်းများ အရ သိရသည်။
၁၉၉၄ - ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ရှေးဟောင်း သုတေသန အမျိုးသား ပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက် ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ပင်းယဂူကြီး သုံးလုံးဖော်ထုတ် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် ထားသည့် အတွက် ပင်းယခေတ် လက်ရာများကို ပင်းယဂူကြီး သုံးလုံးတွင် လေ့လာ နိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
မံစီ ၊ ၂၉-၇-၂၀၁၄
ကချင်ပြည်နယ် မံစီမြို့နယ် တရားရုံး အနီး၌ ဇူလိုင် ၂၇ ရက် ည ၁ဝ နာရီခွဲ ခန့်တွင် ဆိုင်ကယ် သုံးစီးခန့် ဖြတ်မောင်း သွားသည့် အသံ ကြားရပြီး ည ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်တွင် ၄င်းတရားရုံး ခြံစည်းရိုးအနီး ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ခြံစည်းရိုး ၏ အရှေ့ မြောက်ထောင့် နေရာ၌ အမြင့် ၁ ဒသမ ၅ ပေ၊ အောက်ခံအုတ်ရိုး အကျယ် ၃ ပေခန့်မှ ပွင့်ထွက် ပျက်စီးသွားပြီး အုတ်ရိုးပေါ်ရှိ သံဆန်ခါ ခြံစည်းရိုး အကျယ် ၄ပေ၊ အမြင့် ၁ ဒသမ ၅ ပေခန့် ပျက်စီး သွားကာ ခြံစည်းရိုး အတွင်း ၄င်းနေရာနှင့် ၁၅ ပေခန့် အကွာတွင် ရပ်ထားသော ခြောက်ဘီးယာဉ် ၏ဘေးတွင် အချင်း ၁ စင်တီမီတာခန့် ရှိ အပေါက် ၄ ပေါက်ခန့် ထိမှန်ကြောင်း နှင့် လူထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိမှု မရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားသည့် နေရာအား စစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာ တပ်ရင်းမှ သွားရောက် စစ်ဆေးရာ ၁၁ လက်မ အရှည်ရှိ အင်တာနာ ဝါယာကြိုး အနက်ရောင် တစ်ချောင်း၊ သုည ဒသမ ၅ စင်တီမီတာ မှ ၁ ဒသမ ၅ စင်တီမီတာ ခန့်ရှိ ဗုံးစ ၁၅ ခုအား ရှာဖွေတွေ့ရှိ ခဲ့ပြီး ယမ်းအား ပေါက်ကွဲမှု အနေအထားအရ တီအမ်တီ ယမ်း ၅ ပေါင်ခန့် ရှိနိုင်ကြောင်း၊ ရီမုတ် မိုင်းအား ဆိုင်ကယ်ဖြင့် လာ ရောက်ချထားပြီး အဝေးမှ ရီမုတ်ဖြင့် ဖောက်ခွဲ သွားခြင်း ဖြစ်နိုင် ကြောင်းနှင့် အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်စေ ရေး အတွက် စစ်ဆေး ဖော်ထုတ်လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၂၉-၇-၂၀၁၄) အင်္ဂါနေ့
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊ ဒေသတစ်ခု ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် လူသား အရင်းအမြစ် သည် အရေးပါသည်။ အာဟာရ ပြည့်ဝခြင်းသည် လူတို့၏ ခန္ဓာကိုယ် ကြီးထွားရေး၊ ဉာဏ်ရည် ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့်ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်ရေး တို့အတွက် အခြေခံ လိုအပ်ချက် တစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံသားများ အာဟာရ ပြည့်ဝကျန်းမာ ခြင်းသည် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး နှင့် ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး တို့အတွက် အခြေခံ အုတ်မြစ် ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံသားများ အာဟာရ ပြည့်ဝမှသာ နိုင်ငံတော်ကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက် နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှ နိုင်ငံသား များ၏ အာဟာရ အခြေအနေ လည်းဖွံ့ဖြိုး လာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု အခြေအနေကို တိုင်းတာရာတွင် ပြည်သူတို့၏ အာဟာရ အခြေအနေကို ဖော်ပြသည့် ညွှန်းကိန်း များဖြင့် တိုင်းတာ ဖော်ပြ ကြသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အာဟာရ ပြဿနာ နှင့် ကင်းသော နိုင်ငံဟူ၍ မရှိပေ။ မဖွံ့ဖြိုးသော နိုင်ငံများ အနေဖြင့် အာဟာရ ချို့တဲ့မှုကို ကြိုးစား တိုက်ဖျက် နေရ သကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတို့တွင် တဖြည်းဖြည်း တိုးမြင့် လာသော အာဟာရ လွန်ကဲမှုနှင့် နှီးနွှယ် နေသည့် ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ နှလုံး သွေးကြောကျဉ်း၊ ကင်ဆာ စသည့် ရောဂါများဖြစ် ပွားလာမှုကို ရင်ဆိုင် နေကြ ရသည်။
အာဟာရ ပြည့်ဝမျှတ စေရန် အစားအစာ လုံလောက် မျှတစွာ စားသုံးရန် လိုအပ်သည်။ အစားအစာ ပြည့်ဝ မျှတစွာ စားသုံးနိုင်ရန် အိမ်ထောင်စု တွင် အစားအစာ ပြည့်စုံဖူလုံ ရန်နှင့် အာဟာရ အသိပညာ ရှိစွာ စားသုံးတတ်ရန် လိုအပ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် အစားအစာ ဖူလုံသည့် နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ သို့သော် အာဟာရ ဗဟုသုတ နှင့် အစားအစာ စားသုံးမှု အလေ့အထတွင် အားနည်းမှုများ ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။
ထိ်ု့ကြောင့် ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှ စတင်၍ အာဟာရ နှင့် နှီးနွှယ်နေသော ဝန်ကြီးဌာနများ ပူးပေါင်းကာ မြန်မာနိုင်ငံ အစားအစာနှင့် အာဟာရ အစီအစဉ်ကို ငါးနှစ်တစ်ကြိမ် ရေးဆွဲ အကောင် အထည်ဖော် လျက် ရှိသည်။ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားမှု အတိုင်း ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန အောက်ရှိ အမျိုးသား အာဟာရ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် သုတေသန ဌာနသည် အာဟာရ ချို့တဲ့မှု ပြဿနာ ငါးမျိုးကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
ထိုသို့ ဆောင်ရွက် ရာတွင် ပရိုတင်း အင်အားချို့တဲ့ ရောဂါ ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်း၊ သွေးအားနည်း ရောဂါ ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်း၊ အိုင်အိုဒင်း ချို့တဲ့မှု ပပျောက်ရေး လုပ်ငန်း၊ ဗီတာမင်အေ ချို့တဲ့ မှု ပပျောက်ရေး လုပ်ငန်း၊ သူငယ်နာ ဘယ်ရီ ဘယ်ရီရောဂါ ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းတို့ကို လုပ်ငန်းစဉ် များချမှတ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိနေသည်။
ယနေ့ ခေတ်ကာလတွင် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် နိုင်ငံသားများ အာဟာရ ဖွံ့ဖြိုးရေးသည် အရေးပါလျက် ရှိပြီး အာဟာရ ချို့တဲ့မှု၊ လွန်ကဲမှု များကို တားဆီး ကာကွယ်ရန်၊ နိုင်ငံသားတိုင်း အာဟာရ မျှတဖွံ့ဖြိုး စေရန်အတွက် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနက စီမံချက်ချ ဖော်ဆောင်လျက် ရှိသည်။
ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အာဟာရနှင့် နှီးနွှယ်နေသော ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့များ၊ ကုလသမဂ္ဂ နှင့် လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံး က စုပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်မှသာ မြန်မာ နိုင်ငံသားတိုင်း အာဟာရ ပြည့်ဝကာ ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို ပိုမို စွမ်းဆောင်နိုင်ပြီး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သည့် နိုင်ငံတော်သစ်ကို ဖော်ဆောင် နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ရေးသား လိုက်ရ ပေသည်။
နံနက် မိုးလင်းပြီ ဆိုတော့ ဘုရားရှိခိုး ပြီးသည်နှင့် လုပ်နေကျ အလုပ်တစ်ခုက အိမ်ရှင်မ ပီပီ မီးဖိုခန်းသို့ ဝင်ရခြင်း ပါပဲ။ လုပ်နေကျ အလုပ်ထက် အိမ်ရှင်မ တစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်ဆိုလျှင် ပိုမှန်မှာပါ။ အလုပ်တစ်ခုက လုပ်နေကျ ဆိုလျှင် ပုံမှန် ဘယ်အချိန်မှာ ဘာလုပ်မည် ဘယ်လို လုပ်မည်၊ စီစဉ်ထား၍ ရသည်။ သည် အချက်အပြုတ် ဆိုသည့် တာဝန်မှာ ပုံမှန် စီစဉ် ထားလို့မရ။ ယနေ့ ဝယ်ထားသော အသီးအနှံများ မနက်ဖြန် ကောင်းချင်မှ ကောင်းမည်။ အသီးအနှံ အဆင်ပြေလျှင် ဟင်းရွက်များ နွမ်းချင် နွမ်းနေမည်။ အခြေအနေ အရ ကြိုတင် စီစဉ်လို့မရ။ သင့်တော် သလို အိမ်ရှင်မပီပီ ဉာဏ်ကစား၍ စီမံ ချက်ပြုတ် ရသည်။
ချက်ပြုတ်ရန် အတွက် ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များ စီမံရန် ရေခဲသေတ္တာ ကို ဖွင့်လိုက်သည် ဆိုလျှင်ပဲ စိတ်မချမ်းမြေ့ စရာနှင့် ကြုံရသည်။ မြင်ရသည့် မြင်ကွင်းက မသက်သာ။ အရင် နှစ်ရက်က ဝယ်ထားသော အသီးအနှံ များမှာ ကျုံ့နေလေပြီ။ အချို့ ဟင်းရွက်များမှာ ရိနေပြီး အချို့မှာ တစ်ခုနှင့် တစ်ခုထိကာ ပုပ်မလို ဖြစ်နေသည်။ ဝယ်ထားတာ နှစ်ရက်ပဲ ရှိသေးသည်။ ဝယ်တုန်း ကလည်း လတ်လတ် ဆတ်ဆတ်များကို ရွေးဝယ် ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထားတာက လည်း အိတ်နှင့် ထည့်ကာ ဖြစ်သလို စုထည့်ထားခြင်း မဟုတ်။ သေချာ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ရေဆေးပြီးမှ ထည့်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခင် တစ်ပတ် ကလည်း ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်သဖြင့် မေမေ၏ ဆူပူခြင်းကို ခံရသည်။ ရေမဆေးဘဲ ထည့်ခြင်းကြောင့် ယခုလို ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကာ ရှေးလူကြီး ပီပီ ဆူလိုက်သည့် ဖြစ်ခြင်း။ ထို့ကြောင့် ဒီတစ်ခေါက် ရေဆေးပြီး ထည့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ထူးမခြားနား ပါပဲ။ သည်အတိုင်း ဆိုလျှင် မေမေတွေ့လျှင် ဘာပြောဦး မလဲ မသိပါ။
တကယ်တော့ မေမေ ကံကောင်းခဲ့ ပါသည်။ အသက် ခြောက်ဆယ် ကျော်သည်တိုင် ကျန်းမာ သန်စွမ်းလျက် ရှိသည်။ ဘာရောဂါမှ မဖြစ်ဘဲ နေနိုင်သည်။ အသားအရေ ကအစ ကောင်းမွန်သည်ဟု ပြောရမည်။ မေမေ တို့ စားသုံးခဲ့သော အစားအစာ သုံးပုံနှစ်ပုံ လောက်မှာ သဘာဝ စစ်စစ် များဖြစ်သည်။ မေမေတို့ ခေတ်ကို တွေးပြီး ကျွန်မ မနာလို ဖြစ်မိသည်။ မေမေတို့ ခေတ်မှ လူအတော် များများသည် သဘာဝ တရားမှ ရသော သဘာဝ အရသာများကို အပြည့်အဝ စားသုံးခွင့် ရကြသည်။ စားသုံးခွင့် ရသည့်အလျောက် တန်ဖိုးလည်း ထားကြသည်။ သဘာဝ ကိုလည်း ချစ်မြတ်နိုး ကြသည်။ မိမိစားဖို့ရန် အတွက် ကိုယ်တိုင် စိုက်ပျိုး ကြသည်က များပြီး အပြင်မှ အသားငါး လောက်သာ ဝယ်စား ကြသည်။ ယနေ့ ကျွန်မတို့ ခေတ်လို့ ပြောရမည့် အချိန်တွင် ကိုယ်တိုင် စိုက်ပျိုးဖို့ ဝေးစွ သူများ စိုက်ထား သည်ကို အလျင်အမြန် အပြေးအလွှား ချက်ပြုတ် စားကြ ရသည်။
ဘယ်အရာမှ ပိုးသတ်ဆေး အားတိုးဆေး များနှင့်မကင်း။ ထိုဆေးဒဏ် များကြောင့် လူများမှာလည်း ဆိုးကျိုးများ ကိုသာ ခံစားကြ ရသည်။ အသီး အရွက်၏ အာဟာရထက် ပိုးသတ်ဆေး အားတိုးဆေး များ၏ အရသာ ကိုသာ ပိုမိုခံစားကြ ရသည်။ ယခင်နေ့ ကလည်း ပဲတောင့်ရှည် ကို ကြော်စားရန် လှီးပြီးရေဆေး လိုက်သည်။ ခါတိုင်း နည်းတူ ရေကြာကြာ မစိမ် ဖြစ်တော့။ အချိန် နောက်ကျ နေသည့် အတွက် ချက်ချင်း ရေဆေးကာ ကြော်လိုက် ရသည်။ ထမင်းစားတော့ ခါးသက်သည့် အရသာမှာ ပဲသီးနှင့် အတူ ပါလာသည်။ ပဲတောင့်ရှည် ခါးတာ မကြားဖူး။ ကြော်ထား တာလည်း မတူးပါ။ မေမေ့ကို ပြကြည့်တော့ ရေအကြာကြီး မစိမ်သည့် အတွက် ဆေးဓာတ် မပြယ် သောကြောင့် ဖြစ်သည် ဆိုတာ သိရသည်။ ဆီ၊ ဆား၊ ကြက်သွန် အစုံ ထည့်ထားသော ပဲသီးကြော် တစ်ခွက် ဝက်စာပုံး ထဲသို့ ရောက်လေပြီ။ ထို ပဲသီးများကို စားသောဝက်များ ထို့နောက် ထိုဝက်သား များကို စားသော လူများ။ ဘုရားဘုရား သည်သံသရာ လည်တာ ကြီးကို မစဉ်းစားတာ ကောင်းမည်။
အဒေါ် တစ်ယောက်က ပြောဖူးသည်။ '' ဝက်တွေ ကြက်တွေ အသား တိုးအောင် ဆေးတွေနဲ့ လုပ်တော့ အဲဒီဝက်တွေ ၊ ကြက်တွေ အသားတိုး မတိုးတော့ မသိဘူး။ လူတွေကတော့ အသားတွေ တိုးလာတယ် ... '' ဟု ပြောသည်။ ဟုတ်မှာ ပါပဲဟု ကျွန်မ ဖြေမိသည်။ သဘာဝ တရားကို တန်ဖိုး မထားသော ကျွန်မတို့ကို သဘာဝ တရားရဲ့ ဒဏ်ခတ်ခြင်း ပဲလား။
လတ်လတ် ဆတ်ဆတ် ဆေးဖျန်း ထားသော အသီးကြီးကြီး များကို စားမည့်အစား သဘာဝ စစ်စစ် အရသာနှင့် အသီးသေးသေး များကိုသာ စားချင် ပါသည်ဟု ပြောလျှင် ယနေ့ တိုးတက် နေသော ခေတ် ရေစီးကြောင်း တွင် လွန်နေ မည်လား။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ သဘဝကို အပြည့်အဝ စားသုံး ခဲ့ရသော အမေတို့ ခေတ်ကို တွေးကြည့်ရင်း တသသ ဖြစ်ရသည်မှာ တော့ အမှန်ပင် ဖြစ်သည်။ မဖြစ်နိုင်တာကို တမ်းတနေရုံ နှင့်မဖြစ်။ အိမ်သားများ အဆင်ပြေ စေရန် ဖြစ်နိုင် သေးသော အသီးအနှံ များကို ရွေးကာ ဟင်းလျာ တစ်ခွက် ချက်ရ ပေဦးမည်။
Labels: ပညာပေး, လူထုကျန်းမာရေး, ဆောင်းပါး
ကမ္ဘာကျော် မင်းကွန်း ပုထိုးတော်ကြီး ပေါ်သို့ တက်ရောက်ခြင်း မပြုရန် မေတ္တာရပ်ခံ ထားသော်လည်း တက်ရောက် လေ့လာသူများ ရှိနေဆဲဖြစ်
စစ်ကိုင်း ၊ ၂၈-၇-၂၀၁၄
မင်းကွန်း ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု ဒေသရှိ ကမ္ဘာကျော် မင်းကွန်း ပုထိုးတော်ကြီး ပေါ်သို့တက်ရောက် ကြည့်ရှုခြင်း မပြုကြရန် ရှေးဟောင်း သုတေသန ဌာနမှသတိပေး မေတ္တာရပ်ခံ ထားသော်လည်း ပုထိုးတော်ကြီး ပေါ်သို့ တက်ရောက်မှုများ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယခင်က နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွား ဧည့်သည်များ နှင့် ပြည်တွင်း ဘုရားဖူး လာရောက်သူ များကို ပုထိုးတော်ကြီး ပေါ်သို့ တက်ရောက် လေ့လာခွင့် ပြုထားခဲ့သည်။
ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးသွား ဧည့်သည် များသည် ပုထိုးတော်ကြီး ပေါ်သို့ တက်ရောက်ကာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရှုမျှော်ခင်း များကို ကြည့်ရှုခံစားလေ့ ရှိကြသည်။ ပြည်တွင်း ဘုရားဖူး အများစုသည် ပုထိုးတော် ကြီးပေါ်သို့ တက်ရောက်ကာ အဓိဋ္ဌာန်ပြု အုတ်ခဲဆင့်ခြင်း၊ တုတ်ထောက် အဓိဋ္ဌာန် ပြုခြင်းများကို ဆောင်ရွက်လေ့ ရှိကြကြောင်း သိရသည်။
ပုထိုးတော်ကြီး ပေါ်သို့ တက်ရောက် လေ့လာသူ များပြား ခြင်းကြောင့် မင်းကွန်း လေးဌာန ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ဆရာတော်ကြီး များက ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်၊ မေလပိုင်းတွင် အုတ်လှေခါးထစ် များနှင့် စတီးလက်ရမ်း များကို တပ်ဆင် ခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် အင်အား ပြင်းထန်စွာ လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် ငလျင်ဒဏ် ကြီးကြောင့် မင်းကွန်း ပုထိုးတော်ကြီးမှာ ထိခိုက် ပျက်စီးမှုအချို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သဖြင့် ခရီးသွား ဧည့်သည်များ အသက် အန္တရာယ် ထိခိုက်မှု မရှိစေရန် ပုထိုးတော်ကြီး ပေါ်သို့ တက်ရောက် ဖူးမြော် ကြည်ညိုခြင်း မပြုကြရန် ရှေးဟောင်း သုတေသန ဌာနမှ သတိပေး ဆိုင်းဘုတ်များ စိုက်ထူကာ သတိပေး မေတ္တာရပ်ခံ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စာနယ်ဇင်း ဟူသော ဝေါဟာရကို တိုးတက်ရေး ဦးစိန်က ခရစ်နှစ် ၁၉၃၅ ခုနှစ်တွင် စတင်သုံးစွဲ ခဲ့ရာမှ ယနေ့ အချိန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆက်လက် အမွေခံ သုံးစွဲနေကြ သည်မှာ တိုင်းပြည်၏ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ဟု အသိအမှတ်ပြု ခံရလောက်အောင် သြဇာ ကြီးမားသည်။
စာရေးဆရာ တို့သည် ရှေး အစဉ်အလာက ရှိခဲ့သော ကျမ်းဂန်များနှင့် စာပေများမှ လေ့လာ တွေ့ရှိချက်များ၊ ဘဝ အတွေ့အကြုံမှ ရရှိသော ဘဝအသိများ၊ အစဉ်အလာ ရှိခဲ့သော ကျမ်းဂန်များ နှင့် ဘဝအသိ တို့ကို နှိုင်းယှဉ် ၍ လည်းကောင်း၊ ဆက်စပ် ရောနှော၍ လည်းကောင်း စာဖတ်သူတို့ အား စာနယ်ဇင်းများမှ တစ်ဆင့် မျှဝေပေး ကြသည်။ ဤသို့ မျှဝေရာတွင် စာရေးသူ၏ ကျွမ်းကျင်ရာ လိမ္မာသော နည်းဖြင့် ကဗျာ၊ ဝတ္ထု၊ ဆောင်းပါးများ မှာ မိမိတွင် ဖြစ်ပေါ်သော စေတနာ အလျောက် ထေ့လုံး ငေါ့လုံး ကလေးများကို အသစ်အဆန်း ထွင်၍ မထိ တထိ ကလိထား သည်မှာ ရင်ထဲငြိ သလိုလို ရှိပါ၏။
မိမိတို့ မမွေးဖွားမီက အဖြစ်အပျက်များ၊ မိမိတို့ မွေးပြီး သော်လည်း ကိုယ်တိုင် မသိမမြင်ဘဲ တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့်ကြား သိရသော အဖြစ်အပျက် များကို အခြေခံလျက် ကွက်တိကွက်ကျား အမှားမှား အယွင်းယွင်း အတင်းအဖျင်းကို အလေးပေး ရေးသား ထားကြသည် ကိုလည်း အချို့ စာနယ်ဇင်း များမှာ တွေ့ရသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ် ပါတီ အကြောင်း ရေးသားရာ၌ ၁၉၇၅ ခုနှစ် မတ် ၁၅ ရက်တွင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူး ကျင့်သုံးသည် ဟု ရေးထားသည်။ သဘာဝ ယုတ္တိအားဖြင့် ဘာကို ကျင့်သုံး ကြသည်လဲ အဓိပ္ပာယ် စဉ်းစားမရ ဖြစ်နေသည်။ အာဂမယုတ္တိ အားဖြင့် တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးကြည့်ရာ ၁၉၇၅ ခုနှစ် မတ် ၁၅ ရက်သည် ဗကပ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူး တို့ ပဲခူးရိုးမ ရဲနွယ် ချောင်းဖျား၌ ကျဆုံးသောနေ့ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ အပြောကောင်း၊ အရေးကောင်း သလို အမှန် ရေးဖို့လည်း လိုအပ်သည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ အမျိုးသား ညီလာခံ စခဲ့သည် ကို ၁၉၃၃ ဟု ရေးပြန်၏။ နှစ်ပေါင်း ၆ဝ နောက်ပြန်ဆွဲ ထားသည်။
လွန်ခဲ့သော လများ အတွင်းက ဖော်ပြ ခဲ့ကြသော နိုင်ငံတကာ သတင်းများ၌ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တွင် ပြည်သူတို့ ဆေးကုသရေး နှင့် သက်ဆိုင်သော ဥပဒေတစ်ခုကို သမ္မတ အိုဘားမား က ကွန်ဂရက် လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့ရာ အတိုက်အခံတို့က အိုဘားမား၏ ကရုဏာကြေး ( Obamacare ) ဟု သရော်ခဲ့ ကြသည်။ မြန်မာမှု ပြုရသော် သူကြီးဘုရား ရွာသားကောင်းမှု ဟု ဆိုရပေမည်။ တစ်ဖန် ဂျပန်နိုင်ငံ စီးပွားရေး အင်အား တောင့်တင်းရေး အတွက် ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေး က မြားသုံးချောင်း စီမံကိန်း ရေးဆွဲ၍ လွှတ်တော် ( Diet ) သို့ တင်သွင်း ခဲ့သည်ကို အတိုက်အခံတို့က အာဘေးနိုမစ် ( Abenomics ) ဟု သရော်ခဲ့ ကြသည်။ မြန်မာမှုပြုသော် ဝါးလုံးရှည် နှင့် သိမ်းကျုံးရိုက်ရန် အကြံပိုင်သော အာဘေး ၏ စီးပွားရေးမူများ ဟု ဆိုသော် သင့်မည် ထင်သည်။ အိုဘားမားနှင့် ရှင်ဇိုအာဘေး တို့၏ ဥပဒေနှင့် မူဝါဒတို့သည် ၄င်းတို့၏ ရာထူးသက်တမ်း တစ်ခု အတွက်သာ ရည်ရွယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် က ဦးထိပ်ပန်ဆင် ထားသော ဒို့တာဝန် အရေးသုံးပါးသ ည် ကမ္ဘာတည် သရွေ့ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်ကြီး တည်တံ့ရေး အတွက် နိုင်ငံသား အားလုံးက အသက်ထက်ဆုံး ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ကြ ရမည့် အမျိုးသားရေး တာဝန် ဖြစ်သည်။
လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု သမိုင်းမှစ၍ ပြည်သူတို့နှင့် တစ်သားတည်း ရှိခဲ့သော ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် သမိုင်းကြောင်းကို စာတစ်ပုဒ်၊ စာတစ်အုပ် နှင့် ဖော်ပြရုံဖြင့် ပြီးပြည့်စုံမှု မရှိနိုင်ဘဲ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုမျှသာ ဖော်ပြ နိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်၍ အပြောကောင်း၊ အဟောကောင်း၊ အရေးကောင်းသော ဝစနာ လင်္ကာရ ဆရာ အစစ်အမှန် ဖြစ်လိုသူ တို့သည် အမှန်တရားကို သိပြီး မှန်သောစကား၊ အကျိုးရှိသော စကားကိုသာ ဆို၍ ကောင်းသောအမှု၊ မှန်သောအမှု ကိုသာ ပြုကြရမည် ဖြစ်ပေသည်။ ။
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၂၈-၇-၂၀၁၄) တနင်္လာနေ့
ပြည်တွင်းရှိ Ericsson ကုမ္ပဏီ၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် မြန်မာဝန်ထမ်း ၃၅၀ နီးပါး ထပ်ခန့်မည်
ရန်ကုန် ၊ ၂၇-၇-၂၀၁၄
နိုင်ငံတကာတွင် Telecom ဆက်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် နည်းပညာ နှင့် ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော ဆွီဒင်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Ericsson ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကုမ္ပဏီ ရုံးခွဲ ဖွင့်လှစ်ပြီး ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ၊ တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် လာရောက် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ၍ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိရာ ယခုအခါ လုပ်ငန်း တိုးချဲ့ လုပ်ကိုင်ရန် အတွက် မြန်မာဝန်ထမ်း ၃၅၀ ခန့်ကို ယခုနှစ်ကုန် ပိုင်းတွင် ထပ်မံ ခန့်အပ်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း အဆိုပါ ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြား ခဲ့သည်။
ယခု လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ လာရောက် ဖွင့်လှစ် ထားသော Ericsson ကုမ္ပဏီ ရုံးခွဲ၌ မြန်မာဝန်ထမ်း ၈၅ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် နိုင်ငံခြားသား ၀န်ထမ်း ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်အပ် ထားပြီး ပြည်တွင်းရှိ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ၊ ကုမ္ပဏီ ကြီးများ အတွက် Telecom ကွန်ရက် တည်ဆောက် တပ်ဆင်ခြင်း နှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
အလားတူ မြန်မာနိုင်ငံ၌ အော်ပရေတာ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရ ကုမ္ပဏီများ ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော တယ်လီနော ကုမ္ပဏီ နှင့်လည်း ကွန်ရက် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေပြီး နောက်ပိုင်းတွင် Ericsson ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ၄င်း၏ ထုတ်ကုန် ပစ္စည်းများကို မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချရန် အစီအစဉ် များလည်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
Telecom ဆက်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာ နည်းပညာ နှင့် ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကြီး များထဲတွင် ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီကြီး တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်လျက် ရှိသော Ericsson ကုမ္ပဏီသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ဆက်သွယ်မှု ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်အတွက် ကွန်ရက်များ တည်ဆောက်မှု ကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၁၇၀ ကျော်၌ ၄င်း၏ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်များဖြင့် ၀န်ဆောင်မှု ပေးလျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by myawady at 10:03 AM 1 comment:
Labels: ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၂၇-၇-၂၀၁၄) တနင်္ဂနွေနေ့
Posted by myawady at 9:09 PM No comments:
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၂၆-၇-၂၀၁၄) စနေနေ့
အချစ် နှင့် မေတ္တာ
လောကလူတို့ သုံးစွဲနေသည့် ချစ်မေတ္တာဆိုသည့် စကားလုံးသည် လောကအတွက် အရေးပါသည့် စကားလုံး ဖြစ်သည်။ ဤ ချစ်မေတ္တာ တရားကြောင့်သာ လောက၌ လူတို့ အသက်ရှင် ရပ်တည်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ချစ်မေတ္တာ ကုန်ခန်းသော နေ့သည် ကမ္ဘာလောက ပျက်သုဉ်းမည့်နေ့ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
ချစ်မေတ္တာ ဆိုသော စကားလုံးသည် ပုပုရွရွ အရွယ်မှ ဆံဖြူသွားကျိုး အရွယ်အထိ အသုံးပြုသည့် ဝေါဟာရ ဖြစ်ပြီး အချစ်နှင့် မေတ္တာကို ပေါင်းစပ် ထားသည့် ဝေါဟာရ ဖြစ်သည်။ အချစ်ဟူသည့် စကားလုံး သည် ၁၅ဝဝ ကိလေသာကို ဖော်ညွှန်းပြီး မေတ္တာဟူသည့် စကားလုံးသည် ၅၂၈ မေတ္တာကို ဖော်ညွှန်းသည်။
မြန်မာတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု နယ်ပယ်နှင့် ဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်တွင် အချစ်နှင့် မေတ္တာကို ပေါင်းစပ်လျက် ချစ်မေတ္တာဖြင့် ဆက်ဆံ ကြသည်။ အိမ်ထောင်ပြု သားမွေးသည့် လက်ထပ် မင်္ဂလာပွဲကိုပင် အချစ် တစ်ခုတည်းဖြင့် မပြုလုပ် ကြပေ။ အိမ်ထောင်ဖက်ကို အချစ် တစ်ခုတည်းဖြင့် မရွေးချယ်ဘဲ မေတ္တာတရား ဖြင့်ပါ စဉ်းစား ရွေးချယ်ကြ လေသည်။
အချစ် ဟူသည်မှာ တဏှာ (အကြိုက်) သဘော တပ်မက်မှု သဘောဖြစ်ပြီး စိတ်တစ်ခုနှင့် စေတသိက် ၅၂ ခု ပေါင်းထားသည့် နာမ်တရား ၅၃ ခုကို နိပ္ဖန္ဒရုပ် ၁၈ ခု နှင့် လက္ခဏရုပ် လေးခု ပေါင်းထားသည့် ရုပ်တရား ၂၂ ခု နှင့် ပေါင်းလိုက် ပါက ၇၅ ပါး ရသည်။ ထို ၇၅ ပါးကို သန္တာန်နှစ်ပါး နှင့် မြှောက်လျှင် ၁၅ဝ ရသည်။ ထိုတရား ၁၅ဝ ကို ကိလေသာ ၁ဝ ပါးနှင့် မြှောက်ပွားပါက အချစ်ဟု ခေါ်သည့် ၁၅ဝဝ ကိလေသာကို ရရှိသည်။ အချစ်ဟု ခေါ်သည့် ကိလေသာသည် တဏှာ ဦးဆောင်၍ ပူလောင်ခြင်း သဘောရှိသည်။
မေတ္တာတရား ဆိုသည်မှာ သတ္တဝါ အားလုံး အပေါ်၌ အကျိုး လိုလားသော စိတ်ဖြစ်ပြီး အေးချမ်းမှုကို ပေးစွမ်း နိုင်သည်။ ၅၂၈ မေတ္တာသည် အနောဓိသ ပုဂ္ဂိုလ် ငါးယောက်၊ သြဓိသ ပုဂ္ဂိုလ် ခုနစ်ယောက် ပေါင်း ၁၂ ယောက်ကို ဘေးရန် ကင်းပါစေ၊ ကြောင့်ကြ ကင်းပါစေ၊ ဆင်းရဲ ကင်းပါစေ၊ ကိုယ်စိတ်နှလုံး ရွှင်ပြုံးပါစေ ဟူသော အကျိုး လိုလားသည့် စိတ်လေးခု နှင့် မြှောက်ပွားပါက မူလမေတ္တာ ၄၈ ပါး ရသည်။ ထို မူလ မေတ္တာတရားကို အရပ် ၁ဝ မျက်နှာဖြင့် မြှောက်ပွားပါက ၄၈ဝ ရပြီးမူလ မေတ္တာ ၄၈ ပါးကို ပေါင်း ပါက ၅၂၈ ပါးသော မေတ္တာတရား ကို ရရှိသည်။
အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တို့သည် အချစ် တစ်ခုတည်းဖြင့် ဘဝတစ်ခုကို အောင်မြင်အောင် မတည်ဆောက် နိုင်ပေ။ တစ်ဦး၏ အကျိုးကို တစ်ဦးက လိုလားသည့် အနစ်နာခံ စွန့်လွှတ် တတ်သော မေတ္တာ တရားနှင့် ဖြည့်စွက် တည်ဆောက်မှသာ တည်တံ့ခိုင်မြဲသော အိမ်ထောင်ရေး ကို တည်ဆောက် နိုင်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာတို့၏ လူမှု ဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်တွင် အချစ်နှင့် မေတ္တာကို ပေါင်း၍ ချစ်မေတ္တာ ဟူ၍ အနှစ်သာရ ရှိရှိ သုံးနှုန်းခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု နယ်ပယ်နှင့် ဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်တွင် အချစ် တစ်ခုတည်း အကြိုက် တစ်ခုတည်းကို ရှေ့တန်း တင်လျက် ဆင်ခြင်တုံတရား၊ ညှာတာသည့် စိတ်ထား စသည့် မေတ္တာတရား ကို မျက်ကွယ်ပြုလျက် ရှိနေသည် ကိုလည်း တွေ့နေ ရပေသည်။ လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံ ကြရာတွင် ချစ်မေတ္တာ တရားဖြင့် ဆက်ဆံနိုင်ရန် လိုသည်။ အချစ်သည် အတ္တကို ရှေ့တန်း တင်၍ မေတ္တာသည် ပရကို ရှေ့တန်း တင်သည်။ မေတ္တာတရား ဦးဆောင်သည့် အချစ် သည်သာ လောကကို အကျိုးဆောင်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ လူအချင်းချင်း ဆက်ဆံရာတွင် အများ အကျိုး လိုလားသည့် မေတ္တာစိတ်နှင့် ယှဉ်သော ချစ်မေတ္တာဖြင့် ဆက်ဆံ ကြမှသာ အေးချမ်း သာယာသည့် လောကကို ထူထောင် နိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ရေးသား တင်ပြ လိုက်ရ ပေသည်။
Posted by myawady at 8:07 AM No comments:
အမြင်ချင်း မတူသော်လည်း တညီတညွတ်တည်း လက်တွဲဆောင်ရွက်
လောက သဘာဝ တရားအရ လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး အသားအရောင် မတူ၊ အတွေးအခေါ် အယူအဆ မတူ၊ ယုံကြည်ချက် ချင်းမတူ၊ အမြင်ချင်းလည်း မတူကြသည်ကို နားလည် လက်ခံ ပေးကြ ရမည် ဖြစ်သည်။ မိမိ၏ လက်ကို ကြည့်မည် ဆိုလျှင်လည်း တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် အတို၊ အရှည်၊ အနေအထားချင်း တူညီမည် မဟုတ်သည်ကို တွေ့ကြ ရမည် ဖြစ်သည်။
တစ်မိ၊ တစ်ဝမ်းတည်းမှ မွေးဖွား လာကြသည့် ညီရင်း အစ်ကိုများ ဖြစ်လင့်ကစား လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ရှိကြမည်။ ခံယူချက်၊ အမြင်၊ ရည်မှန်းချက်ချင်း ကွဲပြား နေကြမည် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ မတူညီ နိုင်သည့် အရာများကို ထင်မြင် ယူဆရာတွင် တစ်ထစ်ချ ယုံကြည် ဆုံးဖြတ် လိုက်ပါက ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်သည့် ဝိရောဓိ အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိ သွားမည် ဖြစ်သည်။ ကျိုးကြောင်း ဆီလျော်စွာ တွေးတော ကြံဆ သွားမည် ဆိုပါက အကျိုး ဖြစ်ထွန်းမည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာတို့၏ အတိတ် သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်မည် ဆိုလျှင် လူတစ်ဦးချင်း အနေဖြင့် လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်း အနေဖြင့် လည်းကောင်း အမြင် သဘောထားချင်း မတူညီ ကြသဖြင့် အာဃာတများ၊ ဝိရောဓိများ များခဲ့ခြင်း ကြောင့် ဝမ်းနည်းဖွယ် အဖြစ်များနှင့် ကြုံတွေ့ ခဲ့ရပြီး ဖြစ်သည်။ အတိတ် သမိုင်းမှ ရရှိခဲ့သည့် ဘဝ သင်ခန်းစာ များကို ပြန်ပြောင်း သတိပြု ဆင်ခြင်ပြီး သာယာ လှပသည့် လူ့ဘောင် အဖွဲ့အစည်း ဆီသို့ ဦးတည် လျှောက်လှမ်း ကြရမည် ဖြစ်သည်။
မိမိ နေထိုင်ရာ လောကကြီးသည် သဘာဝက အလှတရား များစွာကို အပ်နှင်း ပေးထားသည်။ အဆိုပါ အလှတရား များသည် ပကတိ သန့်ရှင်း စင်ကြယ် ရုံမျှမက ခင်တွယ် မြတ်နိုးဖွယ်လည်း ကောင်းလှသည်။ ထိုသို့ အရောင်အသွေး စုံလှသော လောက သဘာဝ တရားများကို မိမိတစ်ဦး တစ်ယောက် ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အစုအဝေး အဖွဲ့အစည်း ကြောင့်ဖြစ်စေ အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန် အောင် အရောင်ဆိုး ခြင်းသည် မသမာ သူတို့၏ လုပ်ရပ်သာ ဖြစ်သည်။
မြန်မာလူမျိုး များသည် ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့သူများ၊ ကိုယ်ချင်းစာ တရား လက်ကိုင် ထားကြသူများ၊ ကရုဏာ တရား ကြီးမားကြ သူများ ဖြစ်ရာ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး၊ တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် အာဃာတ အငြိုးအတေးများ မထားကြဘဲ ခွင့်လွှတ် နားလည် သည်းခံခြင်းဖြင့် လွတ်လပ်ပြီး လူသားဂုဏ်ရည် မြင့်မားသည့် လူ့ဘောင် အဖွဲ့အစည်း ကို တည်ထောင် ကြရမည် ဖြစ်သည်။
အမြင် သဘောထား၊ ယုံကြည်ချက် အားနည်းခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ပွား ခဲ့ရသည့် အဖြစ်အပျက် များသည် ဆုံးရှုံးမှုကိုသာ ရယူ ပိုင်ဆိုင်ကြ ရသည်မှာ အားလုံးအသိပင် ဖြစ်သည်။ သဘော တူညီမှု၊ စာနာ နားလည်မှု အားနည်း နေသမျှ မျှော်မှန်း ထားသည့် သာယာ ဝပြောသော၊ အေးချမ်း တည်ငြိမ်သော၊ အောင်မြင် တိုးတက်သော လူ့ဘောင် အဖွဲ့အစည်း ဆီသို့ ရောက်နိုင်ဦးမည် မဟုတ်ပေ။
သို့ဖြစ်ရာ သဘောထား အမြင်ချင်း မတူစေကာမူ ညီရင်းအစ်ကို မောင်ရင်းနှမ စိတ်ဓာတ်များ ဖြင့် အေးအတူ ပူအမျှ ဥမကွဲ သိုက်မပျက် နေထိုင်ကြလျက် တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးမှု လမ်းကြောင်း ပေါ်သို့ မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်များ လွင့်ပြယ် မသွားစေရေး အတွက် အတ္တမာနကို ဘေးဖယ်ကာ တညီတညွတ် တည်း လက်တွဲ ဆောင်ရွက် သွားကြရန် တိုက်တွန်း ရေးသား လိုက်ရပေသည်။
Posted by myawady at 11:35 AM No comments:
ပျောက်ဆုံးခရီးသည်တင် လေယာဉ် မာလီနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းတွင် ပျက်ကျခဲ့
MD-83 aircraft of Spanish company Swiftair
The sister-in-law of Lebanese passenger Randa Daher reacts as she holds her mobile phone displayingapicture of Randa and one of her children at her home in the southern Lebanese village of Srifa. According to local media, Randa and her children were on board Air Algerie flight AH 5017, which an Algerian aviation official said crashed en route from Ouagadougou in Burkina Faso to Algiers with 110 passengers on board.
အယ်လ်ဂျီးရီးယား ၊ ၂၅-၇-၂၀၁၄
ဘာကီနာဖာဆို နိုင်ငံမှ အယ်လ်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံသို့ ပျံသန်းလာသည့် ခရီးသည်တင် လေယာဉ် တစ်စင်းသည် ယမန်နေ့က မာလီနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းတွင် ပျက်ကျ သွားခဲ့ကြောင်း အယ်လ်ဂျီးရီးယား အာဏာပိုင် များက ပြောကြား ခဲ့သည်။
စပိန်ကုမ္ပဏီကြီး တစ်ခုဖြစ်သည့် Swiftair ပိုင် အဆိုပါ AH 5017 လေယာဉ်သည် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် မာလီနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းတွင် ရေဒါမှ ပျောက်ကွယ် သွားခဲ့ကြောင်း နှင့် ယင်း လေယာဉ်ပေါ် တွင် ခရီးသည် ၁၁၀ ဦးနှင့် လေယာဉ် အမှုထမ်း ၆ ဦး လိုက်ပါ သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သို့ရာတွင် ၄င်း လေယာဉ် ပျက်ကျသည့် နေရာကို ယခုတိုင် ရှာဖွေနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း နှင့် လေယာဉ်ပေါ်တွင် လိုက်ပါ သွားသည့် ခရီးသည်များ သေဆုံး ၊ ဒဏ်ရာရရှိသည့် အခြေအနေ အား အတိအကျ ဖော်ထုတ် နိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း ဘာကီနာဖာဆို နှင့် ပြင်သစ် အစိုးရအဖွဲ့ မှ တာဝန်ရှိ သူများက ပြောကြား ခဲ့သည်။
အဆိုပါ လေယာဉ်အား ရှာဖွေနိုင်ရန် အတွက် ပြင်သစ် တိုက်လေယာဉ် ၂ စီးက မာလီနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းတွင် ရှာဖွေ ခဲ့သော်လည်း တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ လေယာဉ်ပေါ်တွင် လိုက်ပါ သွားသည့် ခရီးသည် များတွင် ပြင်သစ် နိုင်ငံသား ၅၁ ဦး ၊ ဘာကီနာဖာဆို နိုင်ငံသား ၂၇ ဦး ၊ လက်ဘနွန် နိုင်ငံသား ၈ ဦး ၊ အခြား ဥရောပ နိုင်ငံများမှ ခရီးသည် များလည်း ပါဝင်ကြောင်း နှင့် အဆိုပါ လေယာဉ်သည် မပျောက်ဆုံးမီ ရေဒါမှ နာရီပေါင်း များစွာ အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက် ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။ ယင်း ကိစ္စရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အာဏာပိုင် များက စုံစမ်းလျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၂၅-၇-၂၀၁၄) သောကြာနေ့
လက်ဖက်ခင်း မှ တောက်ခေါက်သံ
ရိုးရှင်းသော ရွာလေး တစ်ရွာကို ရောက်ခဲ့စဉ် ကပေါ့။ ရွာကလည်း ရိုးသကဲ့သို့ လူတွေကလည်း ရိုးလှသည်။ နေထိုင် သွားလာမှု ကအစ အရာအားလုံး ရိုးရှင်းလွန်း သဖြင့် မြင်ရသူ ရင်ထဲတွင်လည်း ရိုးရှင်းသည့် ခံစားမှု တစ်မျိုး တိုးစေသည်။ ခြေကျင် ခရီးကိုသာအားပြုလျက် နေထိုင် ကြသော သည်လို နေရာဒေသမှ လူများကို မြင်တွေ့ ရသောအခါ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ဟိုနား သည်နား ဆိုလောက်သော နေရာကို ဆိုင်ကယ်နှင့် တွင်တွင် သွားခဲ့သော မြို့ကြီးသား များကို ပြေးမြင်မိသည်။
နံနက် မိုးမလင်းခင် ကတည်းက ခြေသံများ ကြားနေ ရသည်။ အလျှိုလျှို ယာထဲ သွားကြသော အသံများ ဖြစ်သည်။ ပလိုင်းခြင်း လေးများ ကျောနောက်မှ လွယ်ကာ စုဖွဲ့လျက် ယာထဲ သွားကြပုံက တစ်မျိုး ကြည်နူးစရာ။ သည်လိုရှုခင်း သည်လို အလှမျိုး ဘယ်ဓာတ်ပုံ ဆရာတို့ ယှဉ်နိုင်လိမ့် မည်နည်း။ သည်လို မြင်ကွင်းက သဘာဝ စစ်စစ် အလှတရား များဆိုတာ မြင်သူတိုင်း ငြင်းနိုင်မည် မထင်ပေ။ လေငွေ့ အေးအေးမှာ အငွေ့ တထောင်းထောင်း နှင့် ရှမ်း ကောက်ညှင်းပေါင်း နှင့် ဆတ်သား ခြောက်ဖုတ် ကလည်း လိုက်ဖက် သကဲ့သို့ လက်ဖက်ခြောက် လှိုင်လှိုင် နှင့် ရေနွေးကြမ်း၏ သဘာဝ အနံ့စစ်စစ် ကလည်း နံနက်ခင်းကို ပြည့်စုံစေသည်။
နံနက်ခင်း လမ်းလျှောက်ရင်း လက်ဖက်ခင်း များကို ရှုမျှော်မဆုံး ကြည့်ရ သည်မှာလည်း အရသာက တစ်မျိုးပင်။ သည်လို နေရာဒေသမှ အပေါင်း အဖော်များနှင့် ခင်မင်မိတ်ဖွဲ့ ရသည်ကိုက ကံထူးခြင်း ပေလား။ သည်လို လှပသော လက်ဖက်ခင်းများ၊ ရှုမဆုံး နိုင်သော တောင်တန်းများ၊ အကွေ့ အကောက် မြေနီလမ်း လေးများဖြင့် အေးချမ်းလှသော သည်နေရာတွင် ဘယ်သို့သော ပူပင်သောကများ ရှိနိုင် လိမ့်မည်နည်း။ အလိုလောဘ နည်းသော ဒေသစရိုက်နှင့် စကားပြောဟန် ကိုက မြင်ရသူအဖို့ အေးချမ်း လွန်းလှသည်။ ကြည်နူးမှု များဖြင့် လှမ်းလျှောက် လာခိုက် လက်ဖက်ခင်း တစ်နေရာ အရောက် မှာတော့ ''တောက်'' ခပ်ပြင်းပြင်း တောက်ခေါက်သံ တစ်ချက် နားထဲမှာ ကြားလိုက် ရသည်။ လက်ဖက်ခူး ချိန်တွင် အများစုမှာ အမျိုးသမီး များသာ ဖြစ်ကြသဖြင့် အမျိုးသားတစ်ယောက် အသံ မဖြစ်နိုင်။ တစ်ဖက်သို့ လှမ်းကြည့် လိုက်သည်။ တစ်ယောက် လက်ကို တစ်ယောက် ကိုင်လျက် မိန်းမရွယ် နှစ်ဦး။ တစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကို နှစ်သိမ့်လျက်။ ဘာဖြစ်သည် ကိုမသိ။ ဧည့်သည်ပီပီ သူများကိစ္စကို ဝင်မမေးတာ ကောင်းမည်။ သို့သော် သိချင်စိတ် တို့မှာ ငယ်ထိပ် တက်လျက်။
ထိုအခိုက် မသိမသာ လှမ်းဆွဲ လိုက်သော လက်တစ်စုံ နောက် ခပ်သုတ်သုတ် လိုက်သွား မိသည်။ အလည် ဖိတ်သော သူငယ်ချင်း ဖြစ်သည်။ ''နင်စိတ်ဝင်စား နေတယ်ဆိုတာ သိလို့ ခေါ်လာတာ။ အကြောင်းစုံ ကို နောက်မှ ပြောပြမယ် ... '' ဟု ထိုသူငယ်ချင်းက ပြောသည်။ အပြန်လမ်း တွင် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် နားမှ ခဏပြေးထွက် လိုက်ရသည်။ အကြောင်းမှာ မြို့ပေါ်တွင် လက်ဖက်ဈေးများ ကောင်းနေ သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မြို့ပေါ်တွင် လက်ဖက်ဈေး ကောင်းသည်နှင့် တောရွာမှ မိန်းကလေး တစ်ယောက်၏ တောက်ခေါက်သံမှာ ဆက်စပ်မှု ရှိလားဟု တွေးစရာ ရှိမည်။ ထို့ကြောင့် တရားခံသည်ကား ပွဲစားဟု ခေါ်သောသူ များကိုပင် ပုံချ ရမည်ဖြစ်သည်။
လက်ဖက်ခူးချိန် မရောက်ခင်တွင် ပွဲစားများ တစ်ရွာဝင် တစ်ရွာထွက် လက်ဖက်ခြံ လိုက်သိမ်း ကြသည်။ ခြံသိမ်းသည် ဆိုရာဝယ် အပိုင်သိမ်းခြင်း မဟုတ်။ သည်ခြံမှ ထွက်သည့် လက်ဖက်ရွက် များကို အခြား ပွဲစားများ နောက်သို့ ပါမသွားရေး ငွေကြိုပေး ကြသည်။ အရင်းအနှီး များသော တောင်သူများ အဖို့ လက်ဖက် ပေါ်ချိန်အထိ ငွေပေါ်အောင် မစောင့်နိုင် သည်က တစ်ကြောင်း၊ ခရီးစရိတ်၊ ထုပ်ပိုးစရိတ် များကြီး လွန်းလှ သည်က တစ်ကြောင်း၊ မြို့ပေါ်မှ ပွဲရုံများ၏ ပံ့ပိုး ပေးမှုဖြင့် ပွဲစားများ၏ စကားလုံးများ အောက်တွင် ယုံကြည်မိခြင်း ကတစ်ကြောင်း အကြောင်း ကြောင်းကြောင့် ကာလပေါက်ဈေး အတိုင်း မရဘဲ ကြိုတင် ငွေယူခြင်းဖြင့် ဈေးနှိမ်ခံ ကြရသည်။
ယခုလည်း လက်ဖက်ဈေးက တက်နေသည်။ ကြိုပေး ထားသည့် ဈေးက အလွန်နည်း နေသောကြောင့် ဈေးတက်ပေးရန် ပြောသည်။ ပွဲစားကလည်း မပေးနိုင်ဟုသာ တွင်တွင် ငြင်းလျက်။ မြို့ပေါ် ကိုယ်တိုင်တက် ရောင်းရန်လည်း လည်လည် ဝယ်ဝယ် သွားနိုင်သူ မရှိ။ ကိုယ်တိုင်လမ်း စဖောက်ရန် ကြုံလာမည့် ကြိုမမြင် နိုင်သော အခက်အခဲများ အတွက် တာဝန်မယူ ရဲကြ။ ထို့ကြောင့် ပွဲစား လက်တွင်းသာ ထိုးအပ်ဖို့က လွဲပြီးအခြား ဘာမျှမရှိ။ သည်လိုနှင့် တစ်နှစ်ရှာတာ တစ်နှစ် ကြိုစားရင်း ကိုယ်ပိုင် ယာခင်းရှိပြီး အထွက်ကောင်း သော်လည်း အကြွေး သံသရာလည် နေကြသည်။
ကျေးရွာများတွင်ယခုဆိုလျှင် မြို့နှင့်အလှမ်းမဝေးလှ။ အခြေအနေ ဗဟုသုတမှ စကာ တစ်စတစ်စ အားယူကုန်းထ နေကြပြီ။ ထို့ကြောင့် ယခင်လို ပွဲစားများ ဈေးမကစား နိုင်ပေမယ့် စကား တည်သော တိုင်းရင်းသား တို့၏ ရိုးသားမှု အပေါ် ကစား နေကြဆဲ။ ထိုအရာကို တွန်းလှန်ဖို့ သူတို့မှာ အင်အားမရှိ။ အတွေ့အကြုံ နှင့် ဗဟုသုတ က လက်တွေ့ကျကျ ဖြစ်ရန်အတွက် တွန်းအားတစ်ခု လိုနေသေးသည်။
သူငယ်ချင်း ပြောပြမှ အစောက တောက်ခေါက်သံ အတွက် ရင်ထဲမှာ ဘဝင်ကျ သွားသည်။ သြော်... သူတို့ခမျာ မှာလည်း မချိတင်ကဲ ဖြစ်နေ ကြရှာသည်။ ဈေးကောင်း ရတာလည်း သိသိကြီးနှင့် အကြွေးများ ကျေပါစေ ဟုသာ ဆုတောင်း ပေးရုံက လွဲလို့ ဘာများ တတ်နိုင်ဦး မည်နည်း။ ညနေခင်း ထမင်းဝိုင်းတွင် လူစုံသလောက် ဟင်းများလည်း စုံသည်။ ဒေသ အစားအစာ များအပြင် သားကောင်သား များလည်း ထူးထူးခြားခြား ပါသည်။ ဧည့်သည် လာလျှင် အိမ်နီးချင်း များပါ ဝိုင်းဧည့်ခံ တတ်သော ဒေသဓလေ့ ကို ချစ်စရာ တွေ့မြင် ရသည်။ '' စားလို့ချိုလား '' ဟု မေးလိုက်သော အသံလာရာ ဘက်ကို ကြည့်လိုက် သောအခါ နံနက် လက်ဖက်ခင်းမှ တောက်ခေါက် လိုက်သော မိန်းကလေး ဖြစ်သည်။ ပြုံးရွှင်စွာဖြင့် ဖော်ရွှေသော မျက်နှာလေးက အပြစ်ကင်း လှသည်။ ပြည့်တက် လာသော ရင်အစုံကို လက်ဖက်ခြောက် လှိုင်လှိုင် ခတ်ထားသည့် ရေနွေးကြမ်းဖြင့် မျှောချရင်း ခေါင်းတစ်ချက် ညိတ်ကာ ဖြေလိုက် ရသည်။
နှစ် ၅၀ ပြည့်တော့မည့် ဂျပန်ကျည်ဆန်ရထား
၁၉၆၄ ခုနှစ် တိုကျို အိုလံပစ်ပွဲတော် စတင်ရန် ၉ ရက်အလို။ ဂျပန်ဧကရာဇ် ဟီရိုဟီတို သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ကျည်ဆန်ရထား စတင် ပြေးဆွဲခြင်း ဖွင့်လှစ်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် ခဲ့သည်။ အဖြူရောင် နောက်ခံတွင် အပြာရောင်မျဉ်း ဆွဲထားသော ကျည်ဆန် ရထားကြီးက တိုကျို ဘူတာရုံ မှ အိုဆာကာ ဘူတာရုံ သို့တစ်နာရီလျှင် မိုင် ၁၃ဝ နှုန်းဖြင့် စတင် ပြေးဆွဲ ခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ကျည်ဆန်ရထား စတင် ပြေးဆွဲခဲ့ပြီး ယခု ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် နှစ် (၅ဝ) တိတိ ပြည့်မည် ဖြစ်သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အထင်ကရ ဖူဂျီတောင်ကြီးကို နောက်ခံ ထားပြီး ကျည်ဆန် ရထားကြီး ဖြတ်သန်း သွားသော ဓာတ်ပုံမှာ ကမ္ဘာကျော် ပုံတစ်ပုံ ဖြစ်ခဲ့ပြီး တိုကျိုမှ အိုဆာကာ အထိ ရထားဂူ ၆၇ မိုင်၊ တံတား အစင်း ၃၀၀၀ တို့ကို ဖြတ်သန်းကာ သတ်မှတ် ထားသည့် အချိန်အတိုင်း ဆိုက်ရောက်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ အမြန်ဆုံး ရထား ခရီးစဉ် အဖြစ် စံချိန်တင် နိုင်ခဲ့သည်။
ယနေ့ ဂျပန်ဘာသာ စကားဖြင့် Shinkansen ဟုခေါ်သည့် ကျည်ဆန်ရထား ပြေးဆွဲမှုသည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အတွင်ကျယ်ဆုံး သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး စနစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ရထား တစ်စီးလျှင် ၁၆တွဲပါဝင်ပြီး တိုကျို - အိုဆာကာ ခရီးစဉ်ကို သုံးမိနစ်လျှင် ရထား တစ်စီးနှုန်း၊ ရထား တစ်စီးလျှင် ထိုင်ခုံ ၁၃၂၃ လုံး၊ တစ်နာရီ လျှင် ၁၆၈ မိုင်နှုန်းဖြင့် ပြေးဆွဲပေး နေသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅ဝ အတွင်း အထူးအမြန် ရထားလိုင်း ခြောက်လိုင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး Tohuku Shinkansen သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ တောင်တန်း ထူထပ်သော ဒေသများ အတွင်း တစ်နာရီလျှင် ၁၉၉ မိုင်နှုန်းဖြင့် ပြေးဆွဲနေသည်။ မြန်ဆန် လွယ်ကူသော ကျည်ဆန်ရထား များကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ပြည်တွင်း လေကြောင်း ခရီးစဉ် များမှာ အပိုသက်သက် နီးပါးဖြစ်ခဲ့ကာ ကာဗွန်ဒိုင် အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လွှတ်မှု နှုန်းမှာလည်း ကားများမှ လွှတ်ထုတ်သော ပမာဏနှင့် နှိုင်းယှဉ် လျှင် ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိသည်။
ထို့ ပြင် ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် စတင်ပြေးဆွဲ ခဲ့စဉ်မှ ယနေ့ အချိန်အထိ ရထား မတော်တဆ ဖြစ်ပြီး လူအသေ အပျောက် ရှိခဲ့ခြင်း မရှိပေ။ နှစ် ၅ဝ အတွင်း ရထား လမ်းချော်မှု နှစ်ကြိမ် ဖြစ်ခဲ့ရာ၂ဝဝ၄ ခုနှစ် မြေငလျင်တွင် တစ်ကြိမ်၊ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် နှင်းမုန်တိုင်း တွင် တစ်ကြိမ် ဖြစ်ခဲ့ သော်လည်း လူ အသေအပျောက် လုံးဝ မရှိအောင် လုံခြုံ စိတ်ချရသော ရထား သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး အဖြစ် စံချိန်တင် ခဲ့သည်။
ဂျပန် ကျည်ဆန်ရထား က ဂျပန် နိုင်ငံတွင် သာမက ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ရှိ ရထား သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး များ အားလုံးကို ခေတ်နောက်ကျ စေခဲ့သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ အမြန်ဆုံး မီးရထား များက တစ်နာရီလျှင် မိုင် ၁ဝဝ နှုန်း အမြန်ဆုံးဖြင့် ခရီးတိုများ ကိုသာ ပြေးဆွဲ နိုင်ချိန်တွင် ဂျပန် ကျည်ဆန် ရထားများက ခရီးရှည်များ ကို တစ်နာရီလျှင် မိုင် ၂ဝဝ နီးပါးဖြင့် အစီး အရေအတွက် များစွာ ပြေးဆွဲ နေခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်း မဟာမိတ် များက ဟီရိုရှီးမား နှင့် နာဂါစကီ တို့ကို အဏုမြူဗုံး ကြဲချ ခဲ့သည့်တိုင် နှစ်ပေါင်း ၂ဝ အတွင်း ကျည်ဆန်ရထား နှင့်အတူ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အခြေအနေ မှာ တစ်ဟုန်ထိုး တိုးတက် မြင့်မား ခဲ့သည်။
၁၉၆၄ ခုနှစ် အိုလံပစ်ပွဲတော် သို့ရောက်ရှိ လာကြသော နိုင်ငံတကာ မှ ဧည့်သည်တော် များက ဂျပန်နိုင်ငံ အတွင်း ဗိသုကာ လက်ရာများ၊ ကားလမ်းများ၊ ဆိုင်ကယ်များ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ ကင်မရာများ၊ ကမ္ဘာ့ အမြန်ဆုံး ကျည်ဆန် ရထားများဖြင့် စည်ကား သိုက်မြိုက် နေသည်ကို အံ့သြဘနန်း တွေ့ရှိ ချီးမွမ်းခဲ့ကြ ရသည်။
နှင်းဖုံးလွှမ်း နေသော တောင်တန်း များကို နောက်ခံထားပြီး ပန်းပွင့်လန်း နေသော ချယ်ရီပင် များကြား လှစ်ခနဲ ပြေးဆွဲ နေသော ကျည်ဆန် ရထားများမှာ ဧကရာဇ်နိုင်ငံ နှင့် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတို့၏ အသွင်နှစ်မျိုး ကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ပေါင်းစပ် ပေးသည့်နှယ် ဖြစ်ခဲ့သည်။
သို့သော် ပထမဆုံး ကျည်ဆန် ရထားလမ်းကို တည်ဆောက် ခဲ့သော အင်ဂျင်နီယာ ဟီဒီယိုရှီးမား နှင့် အမျိုးသား ရထားလမ်း ဥက္ကဋ္ဌ ရှင်ဂျီဆိုဂျို တို့ နှစ်ဦးလုံးမှာ ရထားလမ်း ကုန်ကျစရိတ် က မူလ ခန့်မှန်း ထားသည်ထက် ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်း ပိုကုန်ကျ ခဲ့သဖြင့် ရာထူးမှ နုတ်ထွက် ခဲ့ရပြီး ရထားလမ်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကိုလည်း တက်ရောက်ခွင့် မရခဲ့ချေ။
၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် အင်ဂျင်နီယာ ဟီဒီယိုရှီးမား ကို ရထားလမ်းသစ် ဆောက်လုပ်ရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့ရာ ရှီးမားက သမားရိုးကျ မဟုတ်သော ရထားလမ်း အသစ် တစ်မျိုးကို တည်ဆောက်ရန် အကြံရ ခဲ့သည်။ တောင်စဉ်၊ တောင်တန်း အတိုင်း မသွားဘဲ အကွေ့ အကောက်ကို နည်းနိုင်သမျှ နည်းကာ အတက်၊ အဆင်း ကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့ချပြီး မျဉ်း တစ်ဖြောင့်တည်း၊ ရေပြင် တစ်ညီတည်း ပြေးဆွဲနိုင်မည့် ရထားလမ်းကို ဆောက်လုပ်ရန် အကြံရကာ ယင်း ရထားလမ်းကို တည်ဆောက်ခဲ့ရာ ကျည်ဆန် ရထားလမ်း၏ အစဖြစ်ခဲ့ သော်လည်း သမားရိုးကျ မဟုတ်၊ အသွင်အသစ် ဖြစ်သောကြောင့် ကုန်ကျမှု များစွာ ပိုခဲ့သည့် အပြင် ရထားလမ်း အကျယ်မှာ ၄ ပေ၊ ၈ ဒသမ ၅ လက်မ ရှိသောကြောင့် မူလ လက်ဟောင်း ရထားများလည်း ပြေးဆွဲနိုင်မည် မဟုတ်သဖြင့် အထင်အမြင် လွဲမှားမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပြီး အင်ဂျင်နီယာ နှင့် ဥက္ကဋ္ဌ နုတ်ထွက် ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ထိုအချိန်မှ စတင်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ ၏ ရေနွေးငွေ့သုံး ရထားစက်ခေါင်း များ ထုတ်လုပ်မှုမှာ လုံးဝနီးပါး ရပ်ဆိုင်း သွားခဲ့ပြီး ကျည်ဆန် ရထားခေါင်း များကိုသာ အစဉ်တစိုက် ကောင်းသည်ထက် ကောင်းလာအောင် တိုးတက် ပြုပြင် ထုတ်လုပ် ခဲ့သည်။ ယနေ့ အင်ဂျင်နီယာ ဟီဒီယိုရှီးမား ကို ကျည်ဆန် ရထား၏ ဖခင်ကြီး အဖြစ် ဂျပန်နိုင်ငံ က မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြု ထားသည်။
၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် စတင် ဖွင့်လှစ် ခဲ့ချိန်မှ ယနေ့ အချိန်အထိ တွင် ပထမဆုံး ကျည်ဆန်ရထား လိုင်းတို ကိုင်ဒိုရှင်ကန်ဆင် တစ်ခုတည်းက ခရီးသည်ပေါင်း ၅ ဒသမ ၅ ဘီလျံကို သယ်ယူ ပို့ဆောင် ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ရထားများ မှာလည်း ကောင်းသည်ထက် ကောင်းလာကာ အချိန်ကုန် သက်သာခြင်း၊ ရထားစရိတ် နည်းပါးခြင်း၊ ခုံဖြင့် စီးနင်း လိုက်ပါနိုင်ခြင်း၊ သုံးမိနစ်ခြား တစ်စီး ပြေးဆွဲပေးခြင်း တို့ကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ကား၊ တက္ကစီ၊ လေယာဉ်များ အားလုံးထက်
ကျည်ဆန် ရထားကိုသာ အားလုံးက ရွေးချယ် စီးနင်း ကြသည်။
စတင် ထွက်ခွာပြီး သုံးမိနစ် အတွင်း ၁၆၈ မိုင်နှုန်းအထိ အရှိန်မြှင့်တင် နိုင်ပြီး ၁၉၉ မိုင်နှုန်းဖြင့် ပြေးဆွဲနိုင်ကာ အတွင်းထဲတွင် လေအေးပေးစက် ဖွင့်ထားခြင်း၊ ရထားစက်သံ ဆူညံစြွာ ကားရခြင်း မရှိခြင်း၊ တုန်ခါမှုမရှိ၊ သန့်ရှင်းသော ရေအိမ်များ၊ ရှေ့နောက်လို မှီချနိုင်ပြီး ရထား ဦးတည်ရာ ဘက်သို့ မျက်နှာမူ ထားသော ထိုင်ခုံများ၊ စားစရာ သောက်စရာ များဖြင့် တည်ခင်း ဧည့်ခံပေးသော ရထားမယ်များ၊ သန့်ရှင်း သပ်ရပ်စွာ ဝတ်စားထားပြီး မွန်ရည် သန့်ပြန့်သော ဝန်ထမ်းများ၊ အချိန် အလွန် တိကျခြင်း တို့ဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ကျည်ဆန် ရထားသည် မကျေနပ် စရာမရှိ၊ ကျေနပ်စရာ အတိသာ ပြီးသော သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး စနစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
ယခု နောက်ဆုံးပေါ် ကျည်ဆန် ရထား စက်ခေါင်းများမှာ E5 နှင့် E6 တို့ဖြစ်ပြီး နှာခေါင်းရှည် များကြောင့် အရှိန်မြှင့်တင် ရာတွင် မြန်ဆန်သလို ရထားစက်သံ၊ ရထားလမ်း နှင့် ပွတ်တိုက်သံ ကိုလည်း လျှော့ချနိုင်သည့် အပြင် လိုဏ်ဂူများမှ ထွက်လာသော အခါတွင် ထွက်လာလေ့ ရှိသော ဝုန်းခနဲ အသံကိုလည်း သိသာစွာ လျှော့ချ နိုင်ကြသဖြင့် ရထားစီး ခရီးသည်များ အတွက် သာမက ရထား လမ်းအနီးတွင် နေထိုင်ကြ သူများ အတွက်ပါ အဆင်ပြေ စေသည်။
နှစ်(၅ဝ) ပြည့်ပြီ ဖြစ်သော ဂျပန် ကျည်ဆန်ရထား ဆက်ကြောင်းကား ကျယ်ပြန့် လာနေပေသည်။ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းကို ဆက်သွယ် ပေးမည့် မြေအောက် ရထားဥမင် လိုဏ်ခေါင်း ကို ဖွင့်လှစ် ပြေးဆွဲမည် ဖြစ်သည်။
တိုကျိုနှင့် အိုဆာကာ ရထား လမ်းတွင်မူ သံလိုက် တွန်းအားသုံး ကျည်ဆန်ရထား Maglev များဖြင့် ပြောင်းလဲ ပြေးဆွဲမည် ဖြစ်ပြီး တစ်နာရီ လျှင် ၃၁၁ မိုင်နှုန်းခန့် ပြေးဆွဲနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ကျည်ဆန်ရထား ပြေးဆွဲမှု သက်တမ်း နှစ် (၅ဝ) ပြည့်ခြင်းကို ဂုဏ်ပြု လေ့လာ ရေးသား တင်ပြ လိုက်ရပါသည်။
Labels: ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၃) အမှတ်(၂၉)
၂၄-၇-၂၀၁၄ ရက်ထုတ် ဂျာနယ်အား Download ရယူနိုင်ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ကျူးကျော်အိမ်ခြေ ၂၆၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ် တွင် အများဆုံးရှိနိုင်
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်း ကျူးကျော် အိမ်ခြေ နှစ်သောင်း ခြောက်ထောင် ကျော်ရှိပြီး လှိုင်သာယာ မြို့နယ်တွင် အများဆုံး ရှိနိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ သိရသည်။
ထို့ကြောင့် လှိုင်သာယာ မြို့နယ်ရှိ ကျူးကျော် အိမ်များနှင့် ပတ်သက် ၍ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနတို့ ပူးပေါင်း ဖြေရှင်း ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
ထို့အတွက် လှိုင်သာယာ မြို့နယ်မှ ကျူးကျော် အိမ်ရာများ ကိစ္စကို ဖြေရှင်းပေးရန် အတွက် နေထိုင်ရေး အခက်အခဲ ရှိနေသည့် ဝင်ငွေနည်း ဝန်ထမ်းများ၊ ဝင်ငွေနည်း ပြည်သူများ အတွက် တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာများကို နိုင်ငံတော်မှ ဆောက်လုပ် ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
ထို့အတွက် ငွေကျပ် သိန်းတစ်ရာ အောက် တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာများ ဆောက်လုပ် နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရသို့ တင်ပြ ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဦးစိုးတင့် က ပြောသည်။ လက်ရှိ အခြေအနေ တွင် တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာများ ဝယ်ယူနိုင်စွမ်း မရှိသေးသည့် ဝင်ငွေနည်း နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ပင်စင်စားများ၊ ဝင်ငွေနည်း ပြည်သူများ အတွက် အငှားအိမ်ရာ များကို နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ မူဝါဒနှင့် အညီ မြို့ပြ စီမံကိန်းအရ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ် အစိုးရများ နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့ ညှိနှိုင်းလျက် ရှိပြီး ပြည်ထောင်စု အစိုးရ ဘဏ္ဍာငွေ ခွင့်ပြုမှုနှင့် အိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ရန် မြေနေရာ ရရှိမှု အပေါ် မူတည်ကာ ပုဂ္ဂလိက ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု တို့အပေါ် မူတည်ပြီး ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် တန်ဖိုးနည်း တိုက်ခန်း များအား ကျပ်သိန်း ၁ဝဝ အောက် ရောက်ရှိ စေရေး ပြည်ထောင်စု အစိုးရသို့ တင်ပြ ဆောင်ရွက် သွားမည် ဟုလည်း သိရှိရသည်။
ဘဏ်တချို့က အတိုးနှုန်း မြင့်ပေးသော်လည်း ငွေကြေး ဖောင်းပွမှုနှုန်းကြောင့် ထိရောက်မှုမရှိ
ပြည်တွင်းဘဏ် တချို့က ဘဏ်အပ်ငွေ အပေါ် အတိုးနှုန်း တိုးမြှင့်ပေးခဲ့ သော်လည်း ငွေကြေး ဖောင်းပွမှုနှုန်း ကြောင့် ထိရောက်မှု မရှိဟု သုံးသပ်မှုများ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ပြည်တွင်း ဘဏ်များ ဖြစ်သော သမဝါယမဘဏ်၊ ကမ္ဘောဇဘဏ် နှင့် အာရှ စိမ်းလန်းမှု ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် တို့က ၄င်းတို့၏ ငွေစုဘဏ် အပ်ငွေ အတိုးနှုန်းကို တစ်နှစ်လျှင် ၈ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသို့ တိုးမြှင့် ပေးခဲ့ပြီး အချိန်ပိုင်း အပ်ငွေ အတိုးနှုန်းကို ကာလ အပိုင်းအခြား ပေါ်မူတည်၍ ၈ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းမ ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်း အထိ တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဘဏ်များက အပ်ငွေများ အပေါ် သုည ဒသမ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း မှ သုည ဒသမ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း အထိ တိုးမြှင့်ပေးခြင်း ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေကြေး ဖောင်းပွမှု နှုန်းသည် ယခုနှစ်တွင် ပျမ်းမျှ ခုနစ် ရာခိုင်နှုန်း ခန့် ရှိနေသည်။ ငွေကြေး ဖောင်းပွမှုနှုန်း များကြောင့် ငွေစုဘဏ် အပ်ငွေများ၏ အမှန်အတိုး နှုန်းသည် ၁ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်သာ ရှိပြီး အချိန်ပိုင်း အပ်ငွေ များ၏ အမှန် အတိုးနှုန်း သည် ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ကြားတွင်သာ ရှိနေသည်။
ပြည်တွင်းဘဏ် များ၏ ဝင်ငွေ ရရှိမှုကို ချေးငွေ ထုတ်ချေးမှုမှ အဓိက ရရှိနေခြင်း ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ချေးငွေ အတိုးနှုန်းသည် အပြောင်းအလဲ မရှိဘဲ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းသာ ဖြစ်သည်။ ယခု ပြည်တွင်း ဘဏ်များ ဘဏ်တိုးနှုန်း အနည်းငယ် တိုးမြှင့် ခြင်းသည် မြန်မာ နိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က သတ်မှတ် ထားသော အပ်ငွေ အတိုးနှုန်း ၈ ရာခိုင်နှုန်း ထက် မလျော့စေသော နှုန်းနှင့် ချေးငွေ အတိုးနှုန်း ၁၃ ရာခိုင်နှုန်း ထက် မကျော်လွန် စေသော နှုန်းဘောင် အတွင်းမှ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။